Co Conspirators - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/Wada-hawlgalayaasha
805 Undocufund waxaa la abuuray wixii ka dambeeyay 2017 Thomas Fire, ka dib dabkii ugu weynaa taariikhda California, oo dib loo furay ka dib markii Dabka Hill iyo Woolsey ee 2018. 805 UndocuFund waa dadaal wadajir ah si loo hubiyo in shakhsiyaadka aan sharciga lahayn iyo qoysaska ay saameeyeen masiibooyinka dabiiciga ah ay haystaan ​​taageerada ay uga baahan yihiin Degmooyinka Ventura iyo Santa Barbara halkaasoo qaar badan ay xididdada ka dhigeen.
815 Shabakada Caawinta Dadka
815 gargaarka wadajirka ah waa iskaashi wadareed ka dhan ah raasumaal ka go'an in lagu bixiyo gargaarka labada dhinac aagga Rockford iyada oo loo marayo dhibaatada Coronavirus. “Qalalaasaha” waa wax soo saar nidaam raasamaal midab-takoor ah oo annagu si wadajir ah aan uga soo horjeedno.
Shabakada Gargaarka ee Denton
Denton network network waa isku-duubista gargaarka wadaagga ah iyo wadaagga wax ka qabashada dhibaatooyinka oo loo abuuray ka-jawaabidda masiibada COVID-19. waxaan higsaneynaa inaanu iskuxirno ilaha degmada denton oo aan siinno gargaar kuwa ugu halista badan bulshooyinkayaga.
Gargaarka Labada Dhinac Albaquerque
ABQ Mutual Aid waa isbahaysi ururadda maxalliga ah iyo shakhsiyaadka ka shaqeynaya sidii loo ilaalin lahaa xubnaheena halista ku jira inta lagu guda jiro xaaladda degdegga ah ee COVID-19 ee New Mexico.
Altruist Relief waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso baahiyaha aasaasiga ah ee jiritaanka, waxbarashada ku habboon, iyo aaladda awooda lagu xoojiyo kuwa u baahan iyadoo la sii wado dhaqan celinta daah furnaanta iyo hufnaanta xagjirnimada.
Khaliij kale ayaa macquul ah
Waxaan wadaagnaa aaminaad qotodheer, waarta oo aan kala go 'lahayn oo ah in Khaliij kale uu suurtogal yahay. Anaga, dadka reer koonfur konfurta iyo guud ahaan koonfurta, waxaan u taagan nahay mideyn iyo adkeyn waxaan ubaahanahay kala guur sax ah nolosheena iyo hab nololeedkeena bulshooyinka, dhaqamadeena iyo deegaankeena. Mar dambe uma taagnaan doonno in aan u noqonno aag-wax-u-adeegid dalkan, waxaan dalbanaynaa caddaalad iyo sinnaan.
Tababbarka Wadajirka ah
Apocalypse Training Collective (ATC) waxay abaabushaa dhacdooyin farshaxanka hoos udhigma quweyska iyo dokumeentiga aagga Atlanta. Mawduucyada Skillshare iyo kheyraadka waxay dhammaantood ku xiran yihiin badbaadin iyo horumar xilliyo isdaba joog ah.
Appalachian Herbalist Iskaashiga
Mashruuc iskaashi oo loogu talagalay in lagu taageero hogaaminta bulshada & xubnaha bulshada la haybsooco iyadoo la siinayo gargaar dhammaystiran xilliyada baahida. Shabakad sii kordheysa oo xirfadlayaal ah oo u dhiganta maaliyad / qalab, & daawooyin u dhigma kuwa u dhaqdhaqaaqa.
Wadajirka Caafimaadka ee Appalachian
Shabakad dadka iyo kooxaha ku baahsan oo ku baahsan gobolka Koonfurta Koonfurta ee Appalachian ayaa ku lug leh daryeelka caafimaadka iyo taageerada bulshooyinka dhibaatooyinka iyo halganka ku jira.
Appalachians ka dhanka ah dhuumaha
Appalachians Against Pipelines waxaa ka go'an la dagaalanka Dhuumaha Mountain Valley Pipeline (MVP) iyo mashruucyada kale ee halista ah ee shidaalka laga helo Appalachia. Ka dib sanado badan oo abaabul ah si loo joojiyo MVP, bishii Febraayo ee 2018 sida dhirta loo bilaabay, dadka waxaa ku haray xulasho la'aan laakiin inay geedaha aadaan si ay u difaacaan Peters Mountain iyo Kaymaha Qaranka ee Jefferson. Appalachians Against Pipelines waxaa loo sameeyay sidii geedkii ugu horreeyay loo fadhiistay si loo ilaaliyo buurta iyo Appalachian Trail.
ARECMA (Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Marinana)
Somos una abaabzación de base comunitaria sin fines de lucro creada para trabajar y procurar el bienestar y desarrollo integral del barrio y su gente utilizando como mecanismo maamule la ka qaybgalaa de sus habitantes.
Barnaamijka Badbaadinta Asheville
Waxaa loo sameeyay 2020 si looga jawaabo caqabadaha jira, Barnaamijka Badbaadada Asheville wuxuu dhisaa shabakado caawinaad wadaag ah oo lala yeesho bulshooyinka dulman, wuxuuna kobciyaa midnimada iyo wadaagga. Waxaan aaminsanahay awoodeena si aan u dhisno adduun ka baxsan rabshadaha & cadaadiska.
Shabakada Caawinta Astoria Mutual Aid
Kooxo deris ah oo wada shaqeynaya si ay u taageeraan bulshadeena iyo midba midka kale iyada oo loo marayo xaqiiqada iyo caqabadaha COVID-19.
Shabakada Gargaarka ee Athens
Shabakada Gargaarka Isku-xidhka ee Athens waa isbahaysi ururrada Athens iyo xubnaha bulshada oo isu yimaada si ay u taageeraan xubnaha ugu nugul Athens iyada oo loo marayo xaaladdan caafimaad ee degdegga ah ee dadweynaha. Waxaan hiigsaneynaa inaan ku xirno dadka dadaalada gargaarka socda, aruurinta iyo u gudbinta macluumaadkeena saxda ah beelkeenna, oo aan ugu ololeyno ficillada siyaasadeed ee muhiimka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha aan la qabsan.
Barnaamijka Badbaadinta Atlanta
Waxaan ku badbaadi doonnaa is caawinta midba midka kale.
Markii hore abaabul kadib si caadi ah guryaha 1,200 ee koonfurta bari Austin iyo Waqooyiga Hays County waxaa saameyn ku yeeshay daadad duug ah oo ku saabsan 10 / 31 / 2013, Austin Common Ground Relief wuxuu diiradda saarayaa abaabulida madax banaan, kaalmo toos ah iyo taakuleyn bulshooyinka ay saameeyeen fatahaadaha iyo dhacdooyinka cimilada ba'an ee ka dhacay Bartamaha Texas.
Ballanqaadka BAYAN wuxuu u yahay dadka reer Filibiin - oo ka mid ah kuwa ugu horreeya ee halganka joogtada ah ee dadkeenna ee xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Waxaa lagu aasaasay go'aaminta iyo xoogga inta badan fasalada dulman, Bayan waa isbahaysi ka kooban inta badan ururada shaqaalaha iyo reer miyiga. Qeybaha kaladuwan ayaa sidoo kale xisaabtama inbadan oo kamid ah ururada bahwadaagta la ah xubinimada tirada badan.
Dhakhaatiirta caafimaadku ma ordaan, dhakhaatiirtuna ma hogaamiyaan… Waxaan ku soconeynaa dhabarkaaga iyo dhinacaaga si aad u ogaato geesinimadaada iyo rabitaankaaga inaad halista naftaada u gasho taageero la'aan. Wadarta Daawada Wadada ee ka baxsan Houston.
Ururinta Naqshadeynta ee loo yaqaan 'Beehive Design Collective' waa mid si dardar leh ugu dhiirrigelisay, iskaa wax u qabso ah, isku duwaha faneedyada fanka oo u gogol xaaraya “iskutallaabinta qaab-dhismeedka” iyada oo la abuurayo iskaashi, sawirada ka-hortagga xuquuqda daabacaadda loo istcimaalo agab waxbarasho iyo abaabul. Waxaan u shaqeynaa sidii turjubaanno ereyo-ka-ah oo ah sheekooyinka caalamiga ah ee murugsan, ee nala wadaago iyada oo lala sheekaysanayo bulshooyinka dhibaataysan.
Gargaarka Mutual Berkeley
Gargaarka Berkeley Mutual Aid waa dadaalo horumarineed oo ay sameeyeen mutadawiciin bulshada dhexdeeda ah si ay derisnimo uga helaan meeshii looga baahnaa. Maaddaama dhibaatadan ay sii fideyso, mashruucu wuxuu sii wadi doonaa inuu wax ka qabto oo uu u kala beddelo ahmiyadaha sida loogu baahan yahay. Waqtigaan la joogo, waxaan diirada saareynaa inaan caawino dadka halista weyn ugu jira COVID-19 si ay gacan uga geystaan ​​hagaajinta qalooca, iyo inaan ka caawino dadka sida aadka ah saamaynta ugu leh COVID-19.
Guutada Doonta Weyn
Websaydhkan ayaa soo ifbaxay markii koox dad ah oo fadhigoodu yahay Seattle, Washington agtooda ay ku yaqaanaan abaabul iyo dhaqdhaqaaq ka dhan ah arrimaha ay ka mid yihiin dambi la aanta iyo xabsi, ka hortagga fasiisnimada, abaabulka miyiga, adeegyada bulshada, cunsuriyadda, ka hortagga iyo dhismaha dhaqdhaqaaqa, iyo inbadan ayaa biloowday Juun 2016 si loogu milicsado waqtiga siyaasadeed loona wadaago akhrinta faa iidada leh. Waxaan u maleynay qaabab dhaqdhaqaaqayagu inuu noqdo mid soo dhaweyn leh, fududaan kara kaqaybqaadashada – ballaaran oo soo dhaweyn ah gelitaanka shaqada dhaqdhaqaaqa. Waxaan ku riyoonaynay albaab weyn. Waxaan la kulannay qiyaas ahaan hal sano koox ahaan, ka dibna waxaan sii wadnay wada shaqeyn iyo gooni gooni ururro badan oo ka jira gobolkayaga iyo wixii ka dambeeya. Iyadoo qayb ka ah oo dhiirigelisay kooxdaas, Dean Spade wuxuu abuuray websaydhkan si kor loogu qaado ahmiyadda gargaarka labada dhinac istiraatiijiyad loogu talagalay badbaadinta iyo abaabulidda, oo uu ku sii wado inuu sii wado.
Gargaarka Mutual Birmingham
Mutual Aid, si fudud, waa caado ah is daryeelida midba midka kale. Sida aad saaxiibkaaga u soo qaadan lahayd markii gaarigooda uu burburay, cuno u karisid qoyskaaga, ama ordo dukaanka saaxiibkiis markay xanuunsadaan oo ay u baahan yihiin daawo qabow, adiga oo ka qeyb qaadanaya waxaad abuureysaa bulshada, xiriir dhista, barashada in la daryeelo oo la daryeelo. Waa xasuusin muhiim ah oo ah inaanan keli ahayn. Kulligeen waxaan haysannaa wax la soo bandhigo dhammaanteenna waxaan haysannaa wax aan u baahan nahay.
Goobidda iyo Samatabbixinta Calan Madoow
Laga soo bilaabo xaaladaha daran ee duufaanka illaa dibadbaxyada ilaa duufaannada, Raadinta Calanka Madow iyo Samatabbixintu waxay tagtaa meeshii aan ugu baahanahay si aan uga caawinno dadka iyo xayawaanka si ay u helaan nabadgelyo iyo nabadgelyo. Waxaan nahay urur iskaa wax u qabso ah oo aan kafiilno keydkeena yar iyo deeqaha.
Shabakadda Madowga Nololka Madoow ee loo yaqaan 'Black Lives Matter Global network' waa hay'ad fadhigeedu yahay, urur ay hogaamiso oo hadafkeedu yahay dhisida awooda maxalliga ah iyo in ay faragaliso rabshadaha ay ku hayaan bulshada madow iyo dowlada iyo feejignaanta.
Taageerada asaliga ah ee Madowga
Taageerada dadka asaliga ah ee Black Mesa waxay kuxiran tahay shabakad kaladuwan oo karti leh, qabanqaabiyayaal xidid-hoosaad ah, isku-duweyaal iyo shaqaale ku fiday gobollo badan oo waqtigooda iskaa wax u qabso ah ku taageeraya dadka asaliga ah ee Black Mesa iska caabintooda hawlgallada macdanta dhuxusha weyn iyo dib u dejin khasab ah.
Xiriirka Madoowga Madowga
Ururka 'Black Rose Anarchist Federation' waa hay'ad kacaan wadaagayaal ah oo wadaaga himilooyinka guud ee adduun cusub - adduun ay dadku si wada jir ah u xukumaan goobahooda shaqo, bulshooyinka iyo dhulka iyo halka baahiyaha aasaasiga ah lagu buuxiyo. Adduunyo ay quwadda iyo kaqeybgalku uga soo qulqulato salka hoose iyo bulshada oo loo habeeyo rabitaanka dadka, damacyada, iyo baahiyada halkii ay ka heli lahaayeen macaash, sarreyn cad iyo xukun cunsurinimo, wadaninimo, ama awood dowladeed; iyo halka aan ugu noolaan karno meeraha.
Wadajirka Daawada ee 'Blackcap Medicate'
Wadajirka Daawada ee loo yaqaan 'Blackcap Medical Collective' waa koox isku dhafan oo asaasiga ah oo ku takhasustay cilmi-baarisyada bulshada iyo u dhaqdhaqaaqayaasha kale ee daryeelka caafimaadka oo ku saleysan bioregion-ka Klamath Siskiyou. Himiladeenu waa in aan siinno dhaqdhaqaaqayaasha iyo qabanqaabiyaasha bulshada ilaha wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah sida tababbarka, sahayda caafimaad, iyo tabarucno tabaruc ah oo loogu talagalay dhacdooyinka iyo ficillada tooska ah.
Rone Community Relief
Gargaarka isweydaarsiga ayaa diiradda saaray baahiyaha bulshada iyo qaabdhismeedka taageerada Boone, NC.
Gurmadka Fatahaadda Dhiigyacab
Boulder Flood Relief (BFR) waxaa la sameeyay maalintii ugu dambaysay ee 2013 Boulder / Colorado daadadki, bilowgii sidii xashiishad (#BoulderFloodRelief) si ay iskuduuduub u wadaagaan oo ula wadaagaan isgaarsiinta ku saabsan musiibada dabiiciga ah ee federaalku ku dhawaaqay. Markii hore loogu magacdaray "Occupy Boulder Flood Relief," BFR waxaa abuuray askar ka tirsan halyeeyada Occupy, mutadawiciin iskaa wax u qabso ah, iyo ardayda ka qalin jabisay waaxda Isgaarsiinta ee Jaamacadda Colorado ee Boulder (CU) bishii Sebtember 13, 2013.
Bozeman COVID-19 Shabakada Kaalmada Mutual
Bozeman Mutual Aid waa iskaa wax u qabso, dadaal bulshada ku saleysan oo ujeedadeedu tahay in lagu jaleeco qalooca COVID-19 iyo in la yareeyo culeyska dhaqaale ee fidinta qalooca bulshadayada. Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan si aan u taageerno kala fogaanshaha bulshada, ka caawinta xagga marin habeynta adeegyada bulshada, taageerada maadiga ah ee Liistada Baahiyaha Bulshada, iyo taageero maaliyadeed iyada oo loo marayo Sanduuqa Bulshada si loo ilaaliyo kuwa ugu nugul bulshadayada.
La Brigada Solidaria del Oeste (BSO), es una iniciativa comunitaria autogestionada porpareñerxs de diferentes organisas, espacios creativos y luchas sociales. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo de procesos colectivos en las comunidades y promover la autogestión comunitaria. Esta iniciativa qalliinka luego del paso de la Huracana Maria. Visamos las comunidades más afectadas en el oeste para auscultar necesidades y canalizarlas con el apoyo que hemos estado balanbiendo de personas solidarias en Puerto Rico, la diáspora (en EU, Europe, Latinoamérica) y otros Países.
Gargaarka Mutual Buckingham
Buckingham Mutual Aid waa mashruuc cusub oo hadafkiisu yahay in lagu xoojiyo oo isku xidho bulshooyinkeena laguna taageero midba midka kale iyada oo loo marayo dhibaatada COVID-19 iyo wixii ka dambeeya. Haddii aad haysatid waqti, xirfado, ama ilo aad la wadaagto, ama aad u baahato nooc nooc taageero ah fadlan nala soo xiriir.
Bucks Aid Mutual County
BCMA waa urur bulshada ka shaqeeya oo gacan ka geysanaya yareynta waxyeelada hoyga iyo amni darida cunno ee Bucks County, PA.
Dhisida Degmooyinka Awoodda leh
Kooxda Resilient Neighborhoods (BRN) Kooxda Shaqada ayaa u diyaarisa xaafadaha Koonfurta Arizona kuleylka aadka u daran iyo xaaladaha kale ee degdegga ah ee la xiriira cimilada iyadoo loo marayo isku duwaha bulshada. BRN waxay bixisaa aqoon isweydaarsi, agab, iyo waxqabadka ugu wanaagsan iyada oo loo maro waxqabadka bulshada iyo u diyaarinta. BRN waa qeyb ka mid ah dhakhaatiirta u xilsaaran mas'uuliyadda bulshada-Arizona (PSR-AZ) cutubka ku saleysan Tucson.
Waxaan nahay koox asal ahaan asxaab ah iyo xulufooyin ka socda qowmiyado kaladuwan oo isu yimid maxaa yeelay waxaan aaminsanahay daawada dhirta, xafladda, iyo dib u soo celinta aqoonta asaliga ah sidii hab lagula dagaallami lahaa waqtiyadan adkaa ee adag.
Caawinta Mutual Capital
Caawinta folx ee Tallahassee Florida iyada oo loo marayo hargabkan.
CDMX Ayuda Mutua es una comunidad que qabanqaabin ayuda mutua en la CDMX. Solo podemos progresar si todos estamos a salvo.
Iyaga oo wajahaya burburka Gobolka iyo xadgudubka gabadha ee 'FEMA' post-Maria Puerto Rico, dadku waxay isu abaabuleen goobo iskood u maamusho oo ku yaal Jasiiradda loo yaqaan Centros de Apoyo Mutuo, CAM (Xarumaha Taageerada Mutual).
El CENTRO DE APOYO MUTUO JIBARO DE BARTOLO se inició el pasado mes de octubre ante la xiisad ocasionada por el huracán María.
CAMBU para paraender at Atender las necesidades de sectores rurales en Las Marías. Creamos oportunidades de crecimiento comunitario a través de experienceencias cilmiga, recreativas y culturales.
Xarunta Caawinaada Dadka ee Las Carolinas, Puerto Rico
El Centro de Apoyo Mutuo de Utuado es una iniciativa de apoyo comunitario en conjunto para ganar autonomía y autogestión territorial.
Gargaarka Wadajirka ah ee Charles River
Barnaamijka Gargaarka Mutada-dheer ee Charles River (CRMAP) waa koox u ololeeya dhamaan daafaha magaalada Boston kuwaas oo abaabulaya inay siiyaan caawinaad labada dhinac deganeyaasha aagga u baahan kheyraad. Waxaan ku soo aruurinaynaa Sanduuqa Caawimaadda Mutual Aid si aan u iibsano cunno, agab caafimaad, iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah dadka iyagu codsanaya, abaabulna aan u siineyno ilahaas bulshada. Intaas waxaa sii dheer, waxaan raadineynaa inaan dadka isku keenno oo aan iskaashi la sameyno hay'adaha kale si aan gacan uga geysanno la-dagaallanka caddaalad-darrooyinka raasamaalnimada inta lagu jiro qalalaasahan, caddaalad darrooyinka sida aruurinta guryo aan la bixin karin waqti ay kireystayaashu lumiyaan ilaha dakhligooda.
Shabakadda Gargaarka Wadajirka ah ee Chehalis River
Waxaan nahay shabakad gargaar musiibo oo asaasi ah oo ku saleysan mabaadi'da midnimada, gargaarka labada dhinac, iyo waxqabadka tooska ah ee iskiis u madax bannaan Waxaan u halgamaynaa xoraynta. Bogsii. Quudin. Dayactir Kordhi.
Daryeelka Bulshada ee Chequamegon Bay
Daryeelka Bulshada ee Chequamegon Bay waxaa loo sameeyay ka jawaab celinta cudurka faafa ee COVID-19, in kasta oo howsha iscaawinta ay sii socon doonto. Waqtiyada laga yaabo inay cabsi leeyihiin waxay nooga baahan yihiin inaan si wanaagsan isu taageerno. Si la mid ah sida aan ugu soo qaadanno qasriga qoysaska murugaysan iyo dharka carruurta si loogu dabaaldego dhallaanka, waxaan isugu imaan karnaa bulsho ahaan inaan iska caawinno xilligan adag.
Waxqabadka Cleveland ee Faafida faafa
Jawaabta Cleveland Pandemic waxay ujeedadeedu tahay inay siiso caawinaad wada jir ah & taageerada bulshada ee aagga NEO inta lagu jiro xiisadda COVID-19. Waxaan nahay koox abaabulayaal & xubnaha bulshada ee agagaarka Cleveland oo la shaqeeyay ururo badan.
Isbahaysiga Cadaaladda Cimilada
Isbahaysiga Cadaaladda Cimilada (CJA) ayaa lagu sameeyay 2013 si loo abuuro xarun cusub oo xoog u leh dhaqdhaqaaqa jawiga iyada oo mideeysa jaaliyadaha safka hore iyo ururrada awood xoog leh. Istaraatiijiyadeenna abaabulidda ku-meel-gaadhka ah iyo abaabulidda awoodda ayaa ah dhisidda Kala-guur Xaq ah oo ka fog nidaamyada soo-saarka, isticmaalka iyo dulmiga siyaasadeed, iyo xagga adkeysiga, dib-u-cusboonaysiinta iyo dhaqaalaha loo siman yahay.
Iskaashiga WNC waa urur aan faa'iido doon ahayn oo ka faa'iideysanaya dhaqaalaha iskaashiga & naqshadeynta bey'ada si loo taageero shabakad xarumo jireed oo jimicsi ku leh WNC oo u ah xarumaha adeegyada aadanaha, sameynta bulshada, iyo adkeysiga cimilada ee heer gobol.
Isbahaysiga Shaqaalaha Immokalee
Isbahaysiga Shaqaalaha Immokalee (CIW) waa urur xuquuqul insaanka ku saleysan oo shaqaale ah oo caalamku u aqoonsan yahay guulaha uu ka gaadhay la dagaalanka tahriibinta dadka iyo rabshadaha ku saleysan jinsiga ee shaqada. CIW waxaa sidoo kale loo aqoonsan yahay hormarinta nashqadeynta iyo hormarinta muuqaalka Mas'uuliyadaha Bulshadeed ee Shaqaalaha, shaqaale hogaaminayo, habka suuqa looga dhaqan geliyo ee ilaalinta xuquuqda aadanaha ee silsiladaha bixinta shirkadaha.
Rug Caafimaad ee Goobaha Caafimaadka Guud
Xarunta Caafimaadka ee '' General Ground Health Clinic 'waa hay'ad aan macaash doon ahayn oo siisa daryeel caafimaad oo tayo leh bulshada weyn ee New Orleans, waxayna horumarisaa oo siisaa barnaamijyo wax looga qabanayo baahiyaha daryeelka caafimaadka bulshada iyadoo loo marayo iskaashi wada shaqeyn ah.
Qalabka Caadiga ah ee loo yaqaan 'Stash Mutual Aid'
Marka la eego qalalaasaha iyo qalalaasaha ku xeeran COVID-19, qaar badan ayaa naftooda u kaydsanaaya naftooda, iyagoo iska dhigaya sahayda si loo hubiyo jiritaankooda. Kaabayaashnimada waxay noo sheegeysaa inay tahay midkeen kasta nafteenna, laakiin waxaan ognahay in is xanaaneeynta midba midka kale aan daryeeleyno.
Wacyigelinta Bulshada iyo Mashruuca Bogsiinta
Dhisidda bulshada iyada oo loo marayo bogsiinta iyo u doodidda xudunta aadanaha, dhacdooyinka, iyo barnaamijyada. Abuuritaanka bulshada iyada oo la adeegsanayo dadaallo iskaashi ah oo lagu wacyi-galinayo, abaabulayo, abaabulayo, oo lagu jeclaanayo dadka saameynta ku leh, u adeegidda, iyo ka shaqeynta nidaamyada dulman. U doodista bini aadamka waxay diiradda saareysaa wanaajinta tayada nolosha guud ee dadka ay saameyn ku yeelatay iyo ka shaqeynta nidaamyada dulmiga.
Bulshooyinka Ayaa Ugu Horeeya
Waa himilada, waajibaadka, iyo ujeeddada Community Comes First Inc. (CCF) in loo fidiyo adeegyo jaaliyad ahaan hay'ad samafal iyadoo lasiinayo agabyo iyo gargaar, kahor, inta lagu jiro, iyo musiibada ka dib.
Gargaarka Isku-Dirka ee 'COMO'
Iyada oo wax walba la xiray dad badana ay ku jiraan karantiil si looga hortago faafitaanka fayraska loo yaqaan 'corona virus', dadka ku nool gudaha iyo hareeraha Columbia, MO waxay u baahan doonaan caawimaad xagga helitaanka cuntada, daryeelka carruurta, iyo waxyaabo kale oo badan oo aanan weli ka fikirin.
Iskaashiga Humboldt wuxuu gacan ka geysanayaa dhisidda dhaqaalaha wadajirka Xeebta Waqooyiga California. Waxaan taageernaa dadaallada iskaashi ee jira waxaanan u abuurnaa xalka cusub meeshii looga baahdo. Dhaqaalaha midnimadu wuxuu awood noo siinayaa inaan la kulanno baahiyaheena si waafaqsan dabiiciga, anagoo aan cidna ka faa'iideysan. Waxay ka dhigeysaa dadka iyo dunidaba faa'idada iyadoo mudnaanta la siinayo iskaashiga tartanka iyo iskaashiga ka adkaanta.
Gargaarka Corona 757
Corona Aid 757 waa koox ka shaqeeya gargaarka musiibada ee iskood u taagan iskudayaya inay yareeyaan walwalka iyo yareeyaan / joojiyaan fiditaanka Coronavirus / COVID-19 ee beelkeena.
Gargaarka Mutual Corpus Christi
Shabakada kaalmada isweydaarsiga ee Corpus Christi, TX. Nala soo socodsii hadaad rabto inaad ku tabarucdo ama aad codsato ilo. Waan helchu.
Daryeelka Bulshada ee Cville
Daryeel-bixiyaha Jaalliyadda ee Cville waa jawaab-celin maxalli ah oo maxalli ah oo ka dhaceysa masiibada COVID-19 oo kaashaneysa iskaashi lala yeesho kooxda wadaaddada maxalliga ah ee Cville. Waxay ka kooban tahay xubno bulshada ka tirsan oo ku xidhnaa falsafad fara badan; xarunteeda abaabulida wada shaqeynta deriskeeda ee samafalka.
Baahida Utopia waxay horseed u tahay in dhaqamada iyo hayadaha dowliga ah loo badalo hanaan cusub oo iskaashi ah, madax banaani, iyo iskaa wax u qabso. Demand Utopia waxay adeegsaneysaa avante-garde praxis si ay ugu dhiirrigeliso mala-awaalka iyo hal abuurka dhaqanka, aragtida kacaanka ee kartida aadanaha iyo nolosha xorta ah. Iyada oo la jaan qaadaya hab-dhaqan metamorphosis, Demand Utopia waxay abaabushaa inay ku beddesho hay'addihii kaladuwanaanshaha maamul baahsan, dimoqraadiyad toos ah oo ku saleysan bulshada oo ku saabsan golayaasha xaafadaha iyo iskaashatada shaqaalaha.
Hantiwadaagga Dimuqraadiga ah ee Mareykanka
Dimuqraadiyadda Dimuqraadiga ah ee Mareykanka (DSA) waa hay'adda hanti-wadaagga ugu weyn Mareykanka. Xubnaha DSA waxay dhisayaan dhaqdhaqaaqyo isdaba-joog ah oo ku saabsan isbedelka bulshada iyadoo la sameynayo jiritaanka hantiwadaag dimuqraadi ah oo furan oo ka dhex jira bulshooyinka Mareykanka iyo siyaasada.
Iskuday gacmaha gacmaha iswada
Wadaad kacsan oo ka socda magaalada buuraleyda yar ee Durango, Colorado
Naadiga Dhaqanka Naafada Cadaaladda Naafada
Naadiga Dhaqanka Naafada Cadaaladdu waa guri u ololeeya bariga Oakland, CA waxaa loogu talagalay wacyigelinta maskaxda. Waxay u adeegtaa sidii meel loogu talagalay dadka naafada ah ee bulshada BIPOC iyada oo loo sii marayo munaasabadaha, shirarka, cuntooyinka.
Gargaarka Mutual Durham
Waxaan nahay shabakad deris ah oo abaabulaya gargaarka iskaashiga ee Durham, maalin kasta dadka deggan Durham ee ka shaqeeya kor u qaadista abaabulka maxalliga ah, isku xirka dadka kheyraadka, iyo dhisitaanka dhaqdhaqaaq magaalo oo dhan si wax looga qabto dhibaatadan. Xubnahayagu waxaa ka mid ah waalidiinta, odayaasha, muhaajiriinta, dadka naafada ah iyo jirro daba-dheer, daryeel-bixiyeyaal, shaqaale daryeel, qaban-qaabiyayaal, u-doodeyaal, iyo qof kasta oo raba inuu ka qayb-qaato.
E KY Gargaarka La Wadaago
Waxaan nahay ardayda, waalidiinta, shaqaalaha aan macaash doonka ahayn, kuwa muusikleyda ah, farshaxanada, shaqaalaha waaweyn, iyo xubnaha bulshada ee kusalaysan bariga Kentucky iyo koonfurta-galbeed ee Virginia. Waxaan dooneynay inaan awood siino bulshadayada inay isu yimaadaan oo is caawiyaan midba midka kale.
Dhulka koowaad! lagu sameeyay 1979, iyada oo laga jawaabayo shirkad sii kordheysa, isu tanaasul iyo bulshada deegaanka aan waxtar lahayn. Ma aha urur, laakiin waa dhaqdhaqaaq. Ma jiraan “xubno” EF !, kaliya Earth First! Ers. Waxaan aaminsanahay inaan ku isticmaalno aaladda oo dhan aaladda sanduuqa, laga bilaabo caqabadaha iyo abaabulka sharciga illaa caasinnimada shacabka iyo daayeerka. Markuu sharcigu xallin waayo dhibaatada, waxaan gelinaa jirkeena qadka si aan u joojino burburka. Tallaabada tooska ah ee tallaabada tooska ah ee loo yaqaan 'Earth First'! Waxay soo jiidataa indhaha dhibaatooyinka ku soo food leh adduunka dabiiciga ah, waxayna badbaadisaa nolosha.
Gargaarka Mutual Edgewater
Shabakada Kaalmada Mutual Edgewater waxay bilaabatay inay tahay mid hoose, dadaalka bulshada si loo bixiyo gargaar iyada oo loo marayo hannaan gargaar oo iskaashi ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen dillaaca Covid-19 ee ka dhacay xaafadda Edgewater ee Chicago. Waxaan nahay isku xirka gargaarka wadajirka ah ee madaxbannaan, ma nihin dadaal ku saleysan tabaruca gobolka. Waxaan aaminsanahay in gargaarka labada dhinacba ay noqdaan istiraatiijiyad ka dhex shaqeysa dhaq dhaqaaq ballaaran oo lagu baabi'inayo raasamaal-weynaha, sarreynta caddaanka iyo isbaheysiga. Waxaan isku dayeynaa in aan wax ka qabanno dhibaatooyinka badan ee ku dhex nool bulshadayada, iyaga oo sameynaya waxa aysan dowladda awoodin ama aysan diidi doonin.
Emerge Puerto Rico / Propecto Apoyo Mutuo
Emerge Puerto Rico nace de la experienceencia del Proyecto de Apoyo Mutuo Mariana y busca atender la necesidad apremiante de desarrollar currículo de liderazgo climático basado en la experienceencia de nuestras comunidades.
Injineerada aan Xudduudda Lahayn
Meelaha ugu adag adduunka, Injineerrada aan Xudduudda Laheyn (EWB-USA) waxay iskaashi la sameynayaan bulshada si ay u buuxiyaan baahiyahooda aasaasiga ah ee aadanaha. Waxaan dhiseynaa xidid-hoosaadyo si loo helo dariiqyo loo maro fursadaha. Waxaan ku rakibaynaa haamaha qorraxda si aan u soo qaadno iftiinka halka mugdi ah. Waxaan u qodnay biyo si rajaduhu ay uga soo baxaan dhulka. Mashruuc kastaa wuxuu dhistaa aasaaska bulshada si ay ugu koraan sannadaha soo socda.
Wasaaradda Beeraha Episcopal Farmworker
Wasaaradda Falanqaynta ee Episcopal Farmworker waxay ka jawaabtaa baahiyaha jireed, shucuur ahaan, iyo ruuxiga ee soogalootiga iyo shaqaalaha xilliyada beeraha iyo qoysaskooda, waxayna si firfircoon u taageeraan fursadaha iyaga si ay u noqdaan jiheyn iskood ah.
Shabakada Beerka Tijaabinta
Shabakadda Beeraha Khibradda leh (EFN) waxay fududeeysaa iskaashi geedaha ah iyo cilmi baarista beeraha ee waara si loola dagaallamo isbedelka cimilada adduunka, loo ilaaliyo deegaanka dabiiciga ah, loona hubiyo amniga cunnada ee aadanaha mustaqbalka fog. Waxaan aaminsanahay in taranka dhirta kaqeybqaadashadiisu ay tahay mid aad u ballaaran waxay kuu horseedi kartaa horumar dhinacooda leh si ay nooga caawiso inaanan kaliya la qabsaneynin isbedelka cimilada, laakiin maalin maalmaha ka mid aan xasilinno jawiga.
Kacdoon ka Bixitaan
Kordhinta Mucaaridku waa dhaqdhaqaaq caalami ah oo adeegsada caasinimo sokeeye oo aan rabshado wata isku day lagu joojinayo baabi'inta iyo yareynta halista burburka bulshada.
La Dagaalanka Maandooriyaha Maandooriyaha
Ololaha lagula Dagaallamayo Maxaabiista Maandooriyaha ah (FTP) waa iskaashi lala yeesho Xarunta Sharciga Abolitionist. Ujeeddada FTP waa in ay qabato abaabulka, u doodista iyo ficil toos ah oo lagula tartamo nidaamka xabsiga kaas oo maxaabiista halis gelinaya xaaladaha deegaanka ee khatarta ah, iyo sidoo kale in ay saameyn ku yeeshaan bulshada ku xeeran iyo deegaanka siistemkooda iyo howlahooda.
Isku-duwaha Gargaarka Degdegga ee Knoxville
Gargaarka Degdega ah ee Gargaarka Degdegga ah waa isku-duwaha gargaarka degdegga ah / daryeelka nabarka / yareynta dhaawaca wadareed ee fadhigoodu yahay Knoxville, TN.
Cuntada Aan Baxsanayn
Cunnada Aan Qarxin waa koox isku-urursan oo uruurisa madax-bannaan, oo dadka kale la wadaagaya vegan bilaash ah iyo cuntada khudradda ka sameysan, halka isla mar ahaantaana ka mudaaharaada dagaalka iyo saboolnimada.
Afar shisheeye ayaa isu yimid si ay wax uga qabtaan nabaad-guurka deegaanka ee waxqabadyada bina-aadamnimada. Iyada oo la xoojinayo khibradeena isku dhafka ah ee jawaabta koowaad ee masiibada, sayniska xogta, iyo UX / UI, waxaan u soo baxnay inaan sameyno koox aad ufiican. Sababta oo ah soddon iyo lix saacadood (iyo ku dhawaad ​​ugu badan kafeega) goor dambe, ayaan fikraddayada dhiibnay oo aan badinnay.
Shabakada Caawinta Labada Dhinac ee Fort Collins
Caawinaada isweydaarsiga waa magac cusub oo dhaqan u soo jiray sidii hore. Gargaarka iswada waa iskaashiga shaqsiyaadka jaaliyad la siiyay; wadaagida kheyraadka, xirfadaha. Ku saleysan Fort Collins, Colorado.
Shabakadda Gargaarka Wadajirka ah ee afar geesoodka ah
Wadajirka Maaha Samafalka Gobolka Geeska afarta
Helitaanka Lacag La'aanta ah ee Iskujirayaasha Daryeelka Ilmaha
FAM waxay ku siisaa xanaano caruur lacag la’aan ah munaasabadaha bulshada iyo abaabulka siyaasadeed ee abaabulka kulamada maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in meesha laga saaray caqabadaha marin u helka. Abaabulka siyaasadeed iyo bulshada ayaa loogu talagalay qof walba - oo ay ku jiraan dhalinyarada iyo daryeelayaashooda! Waxaan hiigsaneynaa inaan isku darno meelaha banaan, anagoo ka dhigeyna mid ay dadka u wada heli karaan. Waxaan aaminsanahay xanaano caruur oo lacag la’aan ah, munaasabado qoysaska u wanaagsan, iyo waxbarashada siyaasadeed ee xagjirka ah.
Shabakada Gargaarka Labada Dhinac
Shabakadda Gargaarka Labada Dhinac ee 'Front Range Mutual Aid Network' waxay higsaneysaa inay dadka isku xirto oo ay dhiirigeliso sida wanaagsan ee xiriirka kaalmada labada dhinac ah intii suurtagal ah, iyadoo xoogga la saarayo isu imaatinka bulshada ka baxsan. Si mid kastaaba u bixiyo baahidiisa, kana helo wax walba oo aan awoodno.
Wadaagga Dhaqaalaha mustaqbalka
Qaababka kale ee iskaashiga / kobaca wadareed, waxbarashada, iyo xoreynta / wadaagida xirfadaha / gargaarka wadaagga ah.
Gargaarka Wadajirka ah ee Gainesville
Koox ay dadku ku deeqi karaan gargaar ama weydiisan karaan caawimaad inta lagu jiro aafo-maaliyaddan. Gaar ahaan Gainesville, Florida.
Shabakada Caawinta Labada Dhinac ee Grand Rapids
Waxaan nahay deris aaga Great Rapids Area oo iska caawinaya midba midka kale dhibaatadii 2020 COVID19, ama Coronavirus.
Xarunta Sharciga ee Xeebta Khaliijka ee Sharciga iyo Siyaasadda
Xarunta Xeebta Gacanka ee Sharciga iyo Siyaasadda (GCCLP) waa mid aan faa'iido doon ahayn, shirkad sharci oo dan u ah bulshada iyo xarun caddaalad ah oo leh ujeedo ah in lagu hormariyo isbeddellada qaabdhismeedka xagga caddaaladda cimilada iyo sinnaanta deegaanka ee bulshooyinka midabka leh ee safka hore ee isbeddelka cimilada. GCCLP waxay saadaalineysaa nidaamyada bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadaha guud ahaan Gacanka Koofurta ee sare u qaada sinnaanta iyo caddaaladda dadka oo dhan.
Dhibbanayaasha Xeebta Gacanka-Gacanka Aan Xudduudda Lahayn
Herbalists Without Border (HWB) waxay soo dhaweysaa aragti wadareed ee bulsho caalami ah halkaas oo dadka oo dhami ay helaan helitaanka gebi ahaanba dhirta dabiiciga ah & dhirta dabiiciga ah iyo caafimaadka.
Duufaanta 2015 Joaquin ee ku dhufatay jasiiradaha koonfureed ee The Bahamas ayagoo aargudanaya. Kumaan kun oo reer Bahamiin ah iyo dadka deggan jasiiradan ayaa saameyn ku yeeshay duufaanta nooca-4, oo leh dabaylaha ugu badan ee socon kara oo ah maylalka 132 saacaddii. Lixda jasiirad ee koonfurta nasiib wanaag, waxay lahaayeen qoys aad u tiro badan jasiiradaha kale ee The Bahamas, kuwa badan oo jacayl qoto dheer u leh dadka, iyo saacadaha 24 gudahood duufaanta daadisay xeebaha, Jawaabayaasha HeadKnowles Hurricane 1st ayaa ku dhashay.
Khaliijka caafimaad qaba waxaa ka go'an midaynta iyo xoojinta dadka si loo ilaaliyo loona soo celiyo kheyraadka dabiiciga ah ee Gobolka Khaliijka.
Kilinikada Bilaashka ah ee Herbalista
Xarunta Caafimaadka ee Herbalista waxay u aqoonsan tahay daryeelka caafimaadka xuquuq aasaasi ah oo bini'aadam ah waxayna ka shaqeysaa inay ilaaliso helitaanka caafimaadka iyada oo loo marayo adeegyo caafimaad iyo fursado waxbarasho. Waxaan ku dadaalnaa qaab daryeel caafimaad bulshada ku saleysan oo ku saleysan midnimo ee aan aheyn sadaqo.
Xarunta 'Highlander Centre' ayaa wax ku soo kordhinaysa abaabulka iyo abaabulka dhismaha ee ku yaal magaalada Appalachia iyo Koonfurta. Waxaan la shaqeynaa dadka u dagaallamaya cadaalada, sinaanta iyo waaritaanka, taageerida dadaalkooda si ay u qaadaan ficil wadareed si ay u qaabeeyaan aayahooda.
Humboldt Mutual Aid waa koox ka shaqeeya shabakadda MADR oo ka kooban fanaaniinta maxalliga ah iyo kuwa u ololeeya. Waxaan nahay xubno ka socda bulshada oo ujeeddadeena u leh u diyaargarowga bulshadeena musiibooyinka dabiiciga ah ee mustaqbalka iyo isku caawinta midba midka kale nolol maalmeedka masiibooyinka halista leh ee hanti-wadaagga iyo madax-bannaanida cad.
ICNA Relief USA waxay raadineysaa inay yareyso dhibaatada aadanaha iyadoo bixineysa adeeg daryeel iyo naxariis leh dhibbanayaasha dhibaatooyinka iyo ka badbaaday musiibooyinka. ICNA Relief USA waxay ku dadaaleysaa inay dhisto bulshooyinka caafimaad qabta, xoojiso qoysaska iyo u abuurto fursado kuwa rajo beel inta ay ilaashadaan sharaftooda una doodo baahiyahooda aasaasiga ah ee aadanaha.
Idaho Mutual Aid
Idaho Mutual Aid waa iskaa wax u qabso bulshada jaarka ah oo daris caawisa deriska inta lagu jiro cudurka COVID-19. Caafimaadka bulshada iyo isku-darka dhaqaalaha way adagtahay in la nuugo dadbadan oo muwaadiniinteena ah, guri la'aan ah, dakhliyaro hooseeya, shaqaalaha adeega, bukaanka, curyaamiinta, waayeelka, iyo kuwa aan sharci laheyn oo magacooda lagu daro. Nagala soo qaybgal si aan isu caawino, is-caawino!
Bal ka fikir Hawlaha Biyuhu inay ku saleysan yihiin aragti caalami ah. Ilaa iyo 2012 waxaan gacan ka geysanay inaan hogaaminno isbeddelada aan ku aragnay gudaha sida aan uga fikirno nolosha biyaha, inaan ka shaqeyno isgoyska yareynta halista daadadka, wasakheynta, iyo khataraha dabiiciga ah. Waxaan ogsoon nahay in xalka ugu fiican uu ahaa mid isku dhafan, sidaa darteed waxaan isku dhafan sayniska, taariikhda, aqoonsiga, iyo farshaxanka shaqadeena. Aagagga ugu muhiimsan ee aan diiradda saarno waa caddaaladda cimilada, maareynta biyaha, iyo u diyaarsanaanta musiibada iyo wax ka qabashada.
Wadajirka Asalka Asalka
Wadajirka Ehelnimada Wadajirka ah waa beel ka mid ah haweenka asaliga ah, dheddigga, iyo folx aan sinnayn ee isugu yimaada dhulka Lenni Lenape si ay isu sharfaan midba midka kale iyo ehelkeenna iyada oo loo marayo farshaxan, firfircooni, waxbarasho, iyo wakiilnimo. Annagu, sida awoowayaasha iyo ilaaliyeyaasha aqoonta, waxaan udub-dhexaad u nahay sheekooyinka is-goysyada annaga oo ku dhaqmeeyna la xisaabtanka bulshada iyo aayo-ka-tashi. Waxaan kor uqaadeynaa codadka asalka ah ee asalka ah waxaanuna soo dhawaynaynaa jinsiyadaha isku dhafan, kuwa aan isqorin, dumarka asaliga ah, binary, trans, laba ruux. Waxaan cambaareyneynaa qaababka awooda gumeysiga ee hogaaminta iyo tirada dhiiga. Waan wareegsan nahay oo waxaan u wada shaqeynaa si isku mid ah.
Gargaarka Mutual Asalka
Mutual Assistant Mutual Aid waa shabakad macluumaad iyo taakuleyn leh qaab dhismeedka ka soo horjeedda gumeysi-nimada iyo ka soo horjeedka hanti-goosadnimada. Waxaan u joognaa inaan dhiirigelino oo aan xoojino abaabulka gargaarka isukeenida ee asalka ah iyadoo laga jawaabayo COVID-19.
Shaqaalaha Warshadaha ee Dunida
IWW waa urur ay xubin ka tahay dhammaan shaqaalaha, waa urur u huray abaabulka shaqada, warshadeheena iyo bulshooyinkayada. Xubnaha IWW waxay abaabulayaan inay ku guuleystaan ​​xaalado ka wanaagsan maanta oo ay dhisaan adduunyo dimuqraadiyad dhaqaale berri. Waxaan rabnaa in meelaheena shaqada ay u shaqeeyaan faa iidada shaqaalaha iyo bulshada halkii ay ka heli lahaayeen tiro kooban oo madax iyo maamuleyaal ah.
Isbahaysiga Diinta Caddaaladda Caddaaladda
Ujeeddooyinka Diinta ee Cimilada Cimilada Hadafka cadaaladdu waa inay ahaato wakiillo aamin ah oo abuur abuurka ah iyagoo taageeraya iska caabinta nabaad-guurinta iyo bixinta agab kuwa ilaaliya.
Isku Aruurinta Labada Dhinac ee Gargaarka Magaalada Iowa
Ujeeddada Iskuxirka Waxqabadka ee Magaalada Iowa waa in la abuuro beel loo wada dhan yahay oo deris ah oo u heellan sidii midba midka kale uga caawin lahaa buuxinta baahiyahooda.
Islamic Relief waxay bixisaa gargaar iyo horumar qaab sharaf leh iyadoon loo eegin jinsiga, sinjiga, ama diinta, waxayna ka shaqeysaa sidii ay u xoojin laheyd shaqsiyaadka ka tirsan beelahooda una siiso cod caalami ah. Islamic Relief waxaa hagaya qiyamka iyo waxbarista Quraanka iyo tusaalaha nebiyada.
Hoos ayey u dhacday
Waxay hoos ugu dhaceysaa xarun bulsho oo dhijitaal u ah kacdoon-wadayaasha, la-dagaallanka fascist, madax-bannaanida ka soo horjeedka hanti-goosadnimada iyo dhaqdhaqaaqa ka-hor-tagga gumeysiga. Himiladeenna waa in la bixiyo aalad adkeysi leh oo lagu baahiyo laguna dhiirrigeliyo aragtida kacaanka iyo ficilka.
John Brown Gun Naadiga / Redneck Revolt
Redneck Revolt waa shabakad qaran oo ah mashruucyo difaaca bulshada oo ku faafay baahin ballaaran oo siyaasadeed, diineed, iyo dhaqan dhaqameed. Waa howl-soo-shaqeeye, hay'ad cunsuriyadda ka hortagga ah oo diiradda saareysa xoreynta heerka ka shaqeynta nidaamyada dulman ee xukuma nolosheena. Gobollada ay sharci ahaan ku tababaran tahay difaaca bulshada, laamo badan ayaa doorta inay noqdaan naadiyada John Brown Guns, anaga waxaan ku tababarnaa nafsadeena iyo jaaliyadeena xagga difaaca iyo iskaashiga.
Just Seeds Artist iskaashi
Iskaashiga farshaxanka Justseeds waa shabakad baahsan oo farshaxanimada 29 u heellan bulshada, deegaanka, iyo kaqaybgalka siyaasadeed.Widoo ka shaqeeya Mareykanka, Kanada, iyo Meksiko, Justseeds waxay u wada shaqeeyaan sidii iskaashi mideysan oo daabacayaasha isku fikirka ah iyo ururinta dabacsan ee shaqsiyaad hal abuur leh oo leh aragti gaar ah iyo habab shaqo. Waxaan aaminsanahay awooda isbedelka ee muujinta shaqsi ahaaneed ee riwaayad ficil wadareed.
Shabakad iskuxiran oo taageero isgoyska Asaliga ah.
Sanduuqa Daryeelka Bulshada ee Magaalada Kansas
Hadafkeenu waa inaan siino kaalmo toos ah shakhsiyaadka & qoysaska ku nool KC; si aan shaqo badan u qabanno, waxaan u baahanahay kaalmadaada!
Kaalmada Mutual ee Magaalada Kansas
Waxaan nahay beel diiradda saareysa isku xirka dadka gargaarka qaabab kaladuwan xukun la'aan iyo dhisida beel diiradda saareysa midba midka kale daryeela.
Ka-hortagga gumeystaha, anti-heteropatriarchy, iyo hanti-wadaaga ka soo horjeedka leh dumarka asaliga ah sida mabaadi'dayada hagida. Waxaan nahay isku duubni Diini oo mideynaya xoreynta nihi k'ei / ehelkayaga.
Ilaaliyeyaasha Samafalka Buuraha
Hay'ada Ilaalinta Buuraha ayaa ujeedadeedu tahay inay waxbariso oo dhiirigeliso dadka si ay ugu shaqeeyaan caafimaad, bulsho sii waara iyo dhamaadka ku tiirsanaanta shidaalka shidaalka. Waxaan aaminsanahay in mustaqbal wanaagsan uu u baahan yahay dadka maalin walba inay isugu yimaadaan oo ay aqoonsadaan awooda ay u leeyihiin isbadal waara, waara.
Kaalmo Labaad Oo Looga Baahan Yahay
Kinłani / Flagstaff Mutual Aid waa mid bulshada oo dhan iskaa wax u qabso ugu jawaabaya halista Covid-19. Waxaan diyaarinay xarun si aan iskugu dubbaridno mutadawiciinta si aan u ururinno oo aan ugu qaybinno agabyada lagama maarmaanka u ah kuwa ugu nugul bulshadeena oo aan taageerno ehelka aan qarashka laheyn. Kooxdaan waxaa loo sameeyay abaabul samafal madaxbanaan iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da gargaarka labada dhinac, wadajirka, iyo waxqabadka tooska ah.
Gargaarka Wadajirka ah ee Beesha Kitsap
Gargaarka degdegga ah ee ay wadaagaan iyo bulshada Kitsap inta lagu gudajiray COVID-19.
Xerada L'eau Est La Vie
Xerada L'eau Est La Vie waa xero iska caabinaysa dhuumaha biyaha dul sabeynaya. In kasta oo aanan haysan hogaan, hadana waxaan qiimeyneynaa codka dadka asaliga ah, kuwa madow, dheddigga, iyo labada abaabul ee xagga ruuxa ah. Waxaan ku dagaallameynaa xukun-dilka ee Louisiana, Chata Houma Chittimacha Atakapaw, si loo joojiyo Bayou Bridge Pipeline, mashruuca wareejinta Tamarta Tamarta iyo dhamaadka dabada ee Dakota Access Pipeline.
La Olla Comun es un Centro de Apoyo Mutuo autogestionado en Rio Piedras para actuar colectivamente ante el forsono del gobierno.
Gargaarka Wadaagga ee Degmada Lane
Gaar ahaan waqtiga qalalaasaha, waa inaan si wada jir ah u aqoonsanaa waajibaadka anshax ee ah inaan taageerno xubnaha ugu nugul bulshada. Dadweynaha aan la isticmaalin ee guud ahaan dalka waxaa si aad ah u saameeya dhibaatada COVID-19, maaddaama boqolaal kun ay hadda ku nool yihiin hoy la'aan, awood u gooni ah ama u helidda alaabada ku habboon fayadhowrka iyo sahay caafimaad. Waxaan u ololeeynaa xorriyadda wadajirka ah oo loo maro midnimada fasalka, caddaaladda naafanimada, ka hortagga midab-kala-sooca, baabi'inta, iyo gargaarka labada dhinac ah.
Meelmarinta Mutual Aid Mutual Area
Kaalmada Mutual Area Mutual Aid wuxuu ku bilaabmay iftiinka cudurka faafa ee coronavirus si uu si toos ah ugu waajaho ilaha bulshada ee jira kuwa ubaahan kheyraadkaas, sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah.
Shabakada Caawinta ee Lawrence Mutual Aid
Iyada oo laga jawaabayo cudurka faafa ee sii kordhaya ee qabanqaabiyeyaasha bulshada ee COVID-19 iyo dadka deggan LFK waxaa ka go'an caawinta iyo joogtaynta bulshada inta lagu jiro go'doominta bulshada iyada oo loo marayo shabakad iskaa wax u qabso iyo qorshaynta gargaarka wadaagga ah.
Gargaarka Labada Dhinac ee Dooxada Lehigh
Qaybinta cuntada bilaashka ah, dharka, iyo waxyaabaha nadaafadda u fidiya dadka Allentown.
Nolosha Relief iyo Development waa hay'ad samafal oo caalami ah iyo hay'ad horumarineed, oo xaruntiisu tahay Southfield, Michigan, USA. Himilada Nolosha Relief iyo Development waxay si qoto dheer asal u tahay aaminsanaanta in badbaadinta nolosha ay muhiimad weyn u leedahay aadanaha oo dhan. Iyada oo laga jawaabayo saboolnimada, macaluusha, jahwareerka bulshada iyo dhaqaalaha, masiibooyinka dabiiciga ah, dagaalka, iyo masiibooyinka kale, Life waxay ka shaqeysaa in ay gargaar u fidiso dadka ku nool daafaha adduunka iyada oo la siinayo adeegyo bini'aadannimo sida cunno, biyo, iyo hoy ku meel gaar ah iyo sidoo kale daryeel caafimaad iyo waxbarasho .
Qaadista dadka reer Lowellisiyaanka ah: Caawinaad iyo Kaalmo Dhinac
Intii lagu jiray xiisadda COVID-19, LLAMA waxaa ka go'an inay ka caawiso dadka deggan deegaanka Lowell inay la socdaan wararka maxalliga ah, ayna hubiyaan in qof walba haysto kheyraadka ay u baahan yihiin si ay uga gudbaan dhibaatada.
Jacaylku Xad Ma Leh
Jacaylku Ma Leenayo Soohdimo waa mid xag-jir ah, caado-isku-duubni ah, dhaqdhaqaaq midnimo leh muhaajiriinta, qaxootiga iyo kuwa socdaalka ku jira.
Madxafka Nolosha Hoose ee 9th Ward
Matxafka Sagaasha Wardheer ee Hoose ee Carwada waxaa loo sameeyay in lagu xuso taariikhda hodanka ah ee xaafadan gaarka ah. Kaliya shantii qofba mid ayaa ku soo noqday guryahooda, sheekooyin badan ayaa lumi doona haddii anaga bulsho ahaan aan ku guuldaraysto inaan si firfircoon u xasuusnaano. Matxafka Nolosha wuxuu ka kooban yahay taariikh-hadal afka ah xubanaha bulshada, wuxuuna soo bandhigayaa dhacdooyin muhiim ah oo ka socda taariikhda Qaybta Sagaal-Hoose, iyo munaasabado dhaqameed lagu madadaalinayo laguna barayo.
MAD RVA, ayaa ujeedadeedu tahay inay abuurto nidaam taageero si looga jawaabo COVID-19 iyo saamaynta ay ku yeelatay Richmonders, oo ay ku jiraan yaraanta sahayda, luminta shaqada iyo karantiil. Waxaan si wada jir ah u hawlgalnaa oo ugu horrayn u hawlgalnaa sidii sahay siinno dadka waawayn ee aan heli karin dawada, cuntada iyo alaabada kale ee muhiimka ah
Dariska deriska ee Malden
Waxaan nahay koox ka mid ah dadka deggan Malden oo u heellan caawinta deriskeenna dhibaatada hadda jirta iyo wixii ka dambeeya.
Maska Oakland waa mashiinka ugu hooseeya ee ka dhashay qiiqa iyo dabka si loo siiyo kuwa ugu nugul jaaliyadeena aaladda ugu fudud ee lagula taliyo: maaskaro neefsashada.
Daryeelka Bulshada ee Milwaukee iyo Gargaarka Labada Dhinac
Daryeelka Bulshada ee Milwaukee iyo Mutual Aid waxaa loo habeeyey si ay u siiyaan daryeel iskaashi iyo macluumaad xubnaha bulshada ee sida ugu badan saameyn ugu yeelan kara waqtiyadan aan la hubin.
Molo Deep East Texas Mutual Aid Mutual
Molo (moon + aloe) Mutual Aid waa dadaal loogu talagalay in lagula wadaago baahiyaha dadka maxalliga ah khadka tooska ah iyada oo la rajeynayo in lacag lagu deeqo. Dadaalkani wuxuu ku saleysan yahay texas bari qoto dheer wuxuuna u shaqeeyaa degmooyin ku yaal aagga la sheegay.
Gargaarka Mutual County County
Kani waa Monroe County, Indiana iyo meelaha ku xeeran ee loogu talagalay caawimaada. Hadafkayagu waa inaan kobcinno isku xirnaan wadajir ah oo noo oggolaaneysa inaan daryeelo dadka ugu jiran iyo nugul ee ka tirsan beesheena, oo aan u helno xoog wadajir ah si aan gadaal uga riixno sheekada bulsheed ee ballaaran ee isku-halleeynta shakhsiyadeed iyo u diyaarsanaanta.
Mashruuca Jiilka Cadaaladda iyo Cilmi-baarista Bey'adda
Mashruuca Jiilka Dhaqdhaqaaqa Caddaaladda & Ecology wuxuu dhiirrigeliyaa oo ku hawlan ficil isbeddel ah oo ku wajahan xoreynta iyo soo celinta dhulka, shaqada, iyo dhaqanka. Waxaan ku xidideysanahay dhaqdhaqaaqyo bulsheed oo firfircoon oo ay hogaaminayaan bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo iyo jaaliyadaha midabka leh ee loogu tala galay Isbadal Cadaalad ah oo ka fog faa iidada iyo wasakheynta iyo dhanka caafimaadka, adkaysiga iyo xaqiijinta dhaqaalaha maxalliga ah.
Gargaarka Labada Dhinac iyo Difaaca Vermont
Mutual Aid iyo Difaaca Vermont waa wadajirka kooxaha gargaarka wadajirka ah ee VT oo dhan oo u heellan sidii loo baabi'in lahaa dulmiga, nidaamyada iswada ee loo maro shabakadaha taageerada iskaashiga, mashaariicda gargaarka wadaagga ah iyo barnaamijyada difaaca bulshada.
Mutboro Aid Carrboro
Mutboro Aid Carrboro waa hay'ad beeraysa, koraysa, kunaxirisa bulshooyinka ula kac ah ee taageerada nolosha iyo cadaalada bulshada ee kusalaysan Carrboro, North Carolina.
Musiibo gurmad Musiibo Distro
Distro waa goob madax-bannaan oo loogu talagalay kooxaha gargaarka, dhakhaatiirta, iyo mutadawiciinta bulshada ee ka shaqeynaya inay ku taageeraan kuwa la halgamaya dhibaatooyinka musiibooyinka ka dib is-gargaar. Xilliyadan, kuma tiirsanaan karno gobolka inuu na siiyo. Waxaan ku ilaalinaynaa amaan!
Mutual Aid Katarowki / Kingston mashruuc ay Bilowday AKA Madaxa Banaan ee Bulshada ee Kingston ON. Waxaan u sameynay inaan ka jawaabno baahi aan ku aragnay beesheena si aan u taageerno kuwa u baahan inay is-karantiiliyaan marka loo eego COVID-19.
Mutual Aid Medford iyo Somerville
MAMAS waa hindise lagu siinayo ilo iyo taageero deriskeena Somerville & Medford iyada oo loo marayo praxis-ka labada dhinac. Iyadoo loo marayo waxqabadka wadajirka ah iyo daryeelka, waxaan higsaneynaa inaan yareyno saameynta waxyeelada leh ee co-19 ee bulshadayada.
Gargaarka Mutual Aid Midlands, SC
Mashaariicda kaalmada isweydaarsigu waa nooc ka mid ah kaqeybgal siyaasadeed oo ay dadku mas'uuliyadooda iska saarayaan is daryeelida iyo isbeddelada xaaladaha siyaasadeed. Waxaan hadda abaabulnaa si aan u bixinno ilo iyo taageero agagaarka masiibada COVID19.
Gargaarka Mutual Montgomery
Waa adiga, waa annaga! Mutual Aid Montgomery waxaa loo sameeyay inay kuxirnaato xubnaha bulshada Montgomery ee ay saameysay ugana jawaabto masiibada Covid-19 (“coronavirus”). Dhamaanteen waxaan nahay xubnaha bulshada Montgomery ee raba inaan is daryeelno oo iscaawinno midba midka kale waxaan rajeyneynaa inaan kobcinno isku xirnaan waarta oo xoojiya beesheena.
Shabakada Caawinta Dadka
Dib-u-habeynta Shaqada Iskaashiga, Dhaqaalaha Dib-u-Cusboonaysiinta
Shabakada Caawinaad Iswadaagga ee Ypsilanti
Waxaan aaminsanahay bulsho ahaan inaan xoog badanahay markii aan ka wada shaqeyno sidii aan isu caawin lahayn. Ujeedadayadu waa in aan gacan ka geysanno fududeynta iskaashiga iyo gargaarka intii ugu macquulsan. Si gaar ah diiradda loogu saarayo xubnaha saamaynta ugu badan ku yeeshay iyo kuwa la faquuqay ee ka tirsan beesheena.
Gargaarka Mutual NYC
Mutual Aid NYC waa shabakad dhaqameed badan oo dad iyo kooxo dhisaya nidaamyo taageero loogu talagalay dadka ku nool aagga New York inta lagu guda jiro aafada COVID-19 iyo wixii ka dambeeya.
Gargaarka Mutual SE Ohio
Mutual Aid SE Ohio waa shabakad ka buuxda iskaa wax u qabso, u dhaqdhaqaaqeyaal, abaabulayaal, iyo dad waaya aragnimo caadi ah oo raadinaya inay is caawiyaan oo ay dhisaan xiriir waara ee bulshadayada gargaarka si loo buuxiyo halka hay'adaha caadiga ah, ha ahaadeen kuwa gobolka ama qaybta gaarka loo leeyahay awoodi waayey.
Isku-duwaha Labada Dhinac ee Caawa
Waxaan nahay dhammaan mutadawiciinta aasaasiga ah ee ka hawlgala Gobolka Spokane. Waxaan mudnaanta siineynaa dadka jiran ee naafada ah, naafada ah, karantiil la'aanta mushaharka, waayeelka, kuwa aan diiwaangashanayn, kuwa madow, Madowga, Dadka asaliga ah, iyo / ama dadka midabka leh - oo ay ku jiraan kuwa ka soo barokacay Spokane ee u dhow meelaha u dhow.
Gargaarka Wadajirka ah ee Toledo
Shabakad shaqsiyaad iyo urur bulshada ka shaqeeya oo dhisa isku xirnaan iyo isku xirnaanta gargaarka ee magaalada Toledo, OH.
Guutada Labaad Caawinta Wagon
Waxaan la baxnaa gawaadhi ay ka buuxaan agabyo si loogu qaybiyo kuwa u baahan magaalada hoose ee Bellingham WA.
Xilligan COVID-19, waxaan ka shaqeyneynaa inaan waxbarno oo aan dhisno isku xirnaan bulsho si aan midba midka kale u difaacno oo aan isku dayno inaan aragno mustaqbal u adkeysanaya uguna naxariis badan. Waxaan sii wadi doonnaa shaqada xitaa kadib markaan tan soo helno.
Isbahaysiga Qaranka ee Walaacyada Filibiin
NAFCON waa isbahaysi qaran oo ka tirsan ururada Filibiin, hay'adaha, iyo shakhsiyaadka ka jawaabaya walwalka dadka reer Filibiin ee Mareykanka iyo Filibiin iyadoo la abuurayo barxad ku wajahan ficil oo dadka isugu keenaya dhaqan & hidde, waxbarasho, caafimaad & caafimaad, iyo u doodid.
Ururka Alumni National Association ee Black Panther Party New Orleans Cutubka
Ujeedada Ururka Qaranka ee Alumni Association of Black Panther Party (NAABPP) waa in la hormariyo lana joogteeyo dhaxalka Xisbiga Black Panther Party, in la bixiyo macluumaad, ilaha iyo isku xirka si loo hormariyo loona hormariyo abaabulka bulshada, in la taageero bulshada iyo cadaalada dambiyada, dhalinyarada. horumarka, wax qabadka waxbarashada, u doodista iyo barnaamijyada.
Taakulaynta iyo Difaaca NH
Mutual Aid iyo Difaaca New Hampshire waa urur hoos yimaada koox ka kooban fasalka shaqada Granite Staters oo u heellan sidii loo xoojin lahaa bulshadeena iyada oo la kaalmaynayo shaqsiyaadka ugu nugul iyo ku lug lahaanshaha ficil toos ah.
Mas Muertes majiro
Dhimashada More No waa hay'ad samafal oo saldhigeedu yahay koonfurta Arizona. Waxaan ku bilownay 2004 qaab isbahaysi ah oo bulshada iyo kooxaha caqiidada ah, annagoo u heellan inaan sare u qaadno dadaallada lagu joojinayo dhimashada muhaajiriinta ku sugan cidlada. Hadafka No More More waa in la soo afjaro geerida iyo silica ku teedsan xuduuda Mexico iyo Mareykanka iyada oo loo marayo dadaal madani ah: dadka damiirka ah oo si furan uga shaqeynaya bulshada dhexdeeda si ay u dhowraan xuquuqul insaanka aasaasiga ah.
Ma Jirto Wax Walwal Ah Iskaashatadu waxay ku dadaaleysaa inay ku caawiso meeshii loo baahdo. Waxaan ku dadaalnaa inaan sida ugu fiican ugu dadaalno sidii aan uga caawin lahayn kuwa kale inay noloshooda kula noolaadaan walaac la'aan, haddii daqiiqad keliya.
Shabakadda adkeysiga NorCal
Ujeedada Shabakadda NorCal Resilience Network waa in lagu wareejiyo Xilliga Kala-guurka ah ee loo siman yahay oo loo siman yahay gobol dib-u-cusboonaysiin iyadoo la taageerayo lana dhaqaajinayo xalalka bulshada iyo bey'adda ee Waqooyiga California. Shabakadeena gobolka waxay kordhisaa awoodda mashaariicda aasaasiga ah iyo barnaamijyada, waxay gacan ka geysaneysaa dhisidda goobo lagu daydo oo loogu talagalay xasiloonida iyo adkeysiga; waxayna dhistaa midnimo guud ahaan qeybaha kala duwan ee jinsiyada, fasalka, waaxda iyo gobolka ururada, ganacsiyada iyo hogaamiyaasha ay ka go'an tahay kobcinta kobaca, bulshooyinka adkeysiga leh iyadoo loo marayo iskaashi iyo saameyn wadareed.
Mashruuca Qabanqaabada Waqooyiga Bay
Mashruuca Abaabulka Waqooyiga Bay wuxuu mideeyaa dadka si ay u dhisaan hoggaan iyo awood hoosaad ku saabsan bulshada, dhaqaalaha, cunsuriyadda iyo caddaaladda deegaanka.
Aruurinta Caafimaadka ee North Star
North Star waxaa ka mid ah wacyigelinta wadooyinka, abaabulayaasha caafimaadka xagjirka, iyo tababarayaasha caafimaadka bulshada. Tan iyo 2008, oo salka ku haysa Magaalooyinka Mataanaha ah ee dhulkii la qabsaday ee Dakota.
Gargaarka Labaad ee Waqooyiga Dooxada
Gargaarka Labaad ee Waqooyiga Dooxada waxaa la aasaasay ka dillaacay deg degga ah ee Naafada (Camp Fire), kaas oo noqday midka ugu burburka badan uguna dhimashada taariikhda Kaliforniya, wuxuuna bilaabay la kulanka iyo abaabulista qiyamka iyo mabaadiida aasaasiga ah Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha.
Occupy Sandy waa shabakad kahortaga musiibada oo soo ifbaxday si ay u siiso gargaar wadajirka ah bulshooyinka ay saameysay Superstorm Sandy.
Oglala Lakota Barnaamijka Dhaqanka iyo Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha
OLCERI waxay sameyneysaa goob banaanbax ku filan oo ku saabsan Booska Booska Pine Ridge ee South Dakota oo leh beero aad u badan, kaymo cunno, marawaxado dabayl ah, dhismooyin caws iyo dhismayaal kale oo dabiici ah, biyo qabatin iyo daryeel, dhaqan celinta gawaarida, fardaha badbaadada iyo faras Lakota iyo barnaamijka fuulida, qadarinta dabiiciga, dabagalka, badbaadada cidlada, cunnooyinka waddaniga ah, waxbarashada xoolaha iyo inbadan. Waxaan ku jirnaa wadaxaajood si aan ugu laabano digaagga dhul-beereedka '8000 acre' iyo inaan ku beero keymaha cuntada ee dhulka qabaa'ilka.
Op OK Relief
OpOK Relief waa qayb ka mid ah Waxqabadka Dadka ee musiibada dabiiciga ah ee Oklahoma, oo ah mid aan kala sareyn, dadaal midnimo baahsan. Go'aan sameynta iskaashatada, dimuqraadiyada ka qeybqaadashada, iyo iskaashiga labada dhinac waa kireystayaashayada.
Wadashaqeynta Istaraatiijiyadaha Musiibada ee loo dhan yahay
Himilada Iskaashiga Istaraatijiyadaha Musiibada ee loo wada dhan yahay (Iskaashigu) waa helitaan loo wada siman yahay oo loogu talagalay barnaamijyada iyo adeegyada degdegga ah iyo ka-qeybgal buuxa ee bulshada oo dhan ka hor, inta lagu jiro iyo kadib musiibada.
Shabakada Caawinta Labada Dhinac ee PDX
Wax ka qabashada baahiyaha bulshadeena oo leh awood wadareed, iyo isuduwasho.
Ururka Dadka ee Acupuncture Bulshada
Ururka Dadka ee Suuxinta Bulshada (POCA) waa iskaashi xawli ku socda oo dadka ku lug leh dhaqdhaqaaqa acupuncture bulshada: acupuncturists, bukaannada, rugaha caafimaad, iyo ururada taageera.
Kaalmaynta Wadajirka ah ee Phoenix
Waxaan nahay koox tabaruceyaal iskaa wax u qabso ah oo ka shaqeeya Phoenix, AZ. Waxaan mudnaan siineynaa dadka buka, kuwa naafada ah, karantiil la’aan mushaar, waayeel, bilaa sharci, bilaa madow, Madow, iyo / ama dadka midabka leh.
Isbahaysiga Gargaarka Labada Dhinac ee Pinelands
Hay'ada gargaarka oo is kaashaneysa oo ka shaqeysa dhulkii la qabsaday ee Lenape.
Gargaarka Wadajirka ah ee Pitt
Kooxda 'Pitt Mutual Aid' waxay ka go'antahay inay siiso caawinaad labada dhinac ah, ilaha, iyo bulshada ardayda iyo xubnaha bulshada ee Pittsburgh iyagoo ka jawaabaya jawaabaha hay'addu carqaladaynayaan isla markaana barakicinaya shaqsiyaadka.
Pittsburgh Gargaarka Wadajirka ah
Waxaan nahay koox xubnaha bulshada madaxbannaaneysa ee caawineysa dadka waaweyni ee ku nool aagga weyn ee Pittsburgh inay ku xiriiraan midba midka kale si aan ula wadaagno kheyraadka oo aan u helno taageero sidii aan u baadi goobeynay dhibaatada COVID-19 iyo saameynta dhaqaale ee socota.
Xeeladaha Duulimaadka, Inc. waa a 501 (c) (3) urur, oo lagu aasaasay 1997 si loo fududeeyo mashaariic kala duwan oo ku lug leh dadka naafada ah, oo ay ku jiraan shaqada gargaarka musiibada ka dib. Hawlaha dib u soo kabashada musiibada ee ugu dheer ee Portlight waxay raacday burburka Superstorm Sandy ee xeebaha New Jersey iyo qaybo ka mid ah Magaalada New York, waxayna qaadatay ugu dambeysay bilaha 18. Intii lagu jiray wakhtigaas, waxaan beddelnay qalab caafimaad oo waara iyo rakibitaan, waxaanan ka caawinay deggeneyaasha iibsashada iyo rakibidda qalabka marin-u-helka ee lagama maarmaanka u ahaa ka dib markii guryahooda kor loo qaaday si ay u buuxiyaan shuruudaha caymiska daadadka federaalka.
Awoodda ayaa Nooga dhigaysa mid Wada Jir ah
Awoodda ayaa Nooga dhigeysa Cudur (PMS) waa mashruuc cilmi baaris hal abuur leh oo diiradda saaraya dhaqamada daryeelka madaxbannaan ee caafimaadka iyo shabakadaha laga helo aragtida haweenka. PMS waxay dooneysaa inay fahanto qaababka maskaxdeena, jidheed, iyo bulsheedkeena u saameeyo isku dheelitirka iyo ku xadgudubka awooda. Waxaan fahamsanahay in dhaqdhaqaaqa, qasabka ama haddii kale, uu yahay mid sii kordheysa oo caan ka ah nolosha nolosha anthropocene-ka. Hadafkan loogu talagalay midnimo-la’aanta meelaynta, waxaan ku bilaabeynaa caafimaad. PMS waxaa ka go'an inay horumariso aaladaha xorta ah ee midnimada, iska caabinta, iyo jahwareerka kaasoo lagu wargaliyo inay si qoto dheer uga walaacsan yihiin wanaagsanaanta meeraha.
Shabakadda 'Power Shift network' waxay abaabushaa awoodda wadajirka ah ee dadka dhallin-yarada ah si loo yareeyo isbeddelka cimilada loona abuuro mustaqbal wanaagsan, mustaqbal tamar nadiif ah iyo adkeysiga, bulshooyinka oo kobcaya.
Daryeelka Bulshada ee Primrose
Kooxo deris ah Austin TX oo raadinaya inay kobciyaan naxariista bini-aadamka ee magaalada iyada oo loo marayo ficillo dhisidda bulshada iyo daryeel naxariis leh dadka ku dhawaaqa meeshan gurigooda.
Mashruuca Quwada Korantada ee Queer
Mashruuca Queer Ecojustice Project wuxuu abaabulaa isgoyska cadaalada deegaanka iyo xoreynta queer. Waxaan u aragnaa tan inay tahay marin dhaqdhaqaaq isgoysyada si loo yareeyo dhaqanka, miyirka, iyo bulshada ku hareereysan danahayaga wadajirka ah iyo dhisidda isbaheysiga guud ahaan kala duwanaanta.
Waxqabadka Radical ee Buuraha 'iyo Badbaadada Dadka
Waxaan halkaan u nimid inaan u halgano badbaadada dhulka iyo dadka Appalachia, xaqa helitaanka mustaqbal caafimaad leh oo waara oo hawo nadiif ah iyo biyo nadiif ah leh, iyo xuquuqda nolol lagu nafaqeeyo mustaqbalkaas. Marka lagu daro ka hortagga warshadaha dhuxusha barta laga soo saaro, waxaan sidoo kale u aragnaa ficil toos ah faragelin toos ah, taageero toos ah / adeeg, ka shaqeynta abuurista xalal ku saleysan bulshada iyo abaabulka bulshada iyo awoodsiinta. Waxaan qayb ka nahay dhaqdhaqaaqa ballaaran ee lagu joojinayo ka saarista buurta oo ay ku jiraan ururo badan oo adeegsanaya xeelado kala duwan.
Shabakada Waxqabadka Roobka
Shabakada Waxqabadka Roobka ayaa ilaaliya kaymaha, waxay ilaalisaa jawiga waxayna ilaalisaa xuquuda aadanaha iyadoo la loollamayo awood shirkadeed iyo cadaalad darro nidaamsan iyada oo loo marayo iskaashi hore iyo ololeyaal istiraatiiji ah.
Awood u adkeysiga
Resilience Force waa hindise qaran oo lagu badalayo jawaab celinta Mareykanka ee musiibada iyadoo la xoojinayo laguna sugayo Amnigelinta Awoodda Mareykanka - malaayiinta dadka ah shaqadooda, qalbigooda iyo khibradooda waxay ka dhigayaan ka soo kabsasho waarta musiibooyinka suurta galka ah.
Gargaarka Wadajirka ah ee RGV
Wadajirka caawimaadda wadajirka ah ee ay abuureen oo ay ku shaqeeyaan abaabulayaasha RGV iyo xubnaha bulshada.
Tideynta Tide waa mid caalami ah, iskaa wax u qabso ah, shabakad kooxeedyo iyo shakhsiyaad abaabulaya gudaha, kor u qaada xalka bulshada ku saleysan xiisadda cimilada oo tallaabo toos ah ka qaadda sababaha asalka u ah isbeddelka cimilada.
Isku Duwaha Caafimaadka Magaalada Magaalada
Waxaan nahay wada shaqeyn caafimaad oo ku tababaran wadooyinka, EMTs, dhakhaatiirta caafimaadka, jawaabayaasha koowaad ee cidlada, dhaqatada, iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee ku saleysan Richmond, Virginia - caadiyan dhulkii Powhatan.
Gargaarka Wadajirka ah ee Roanoke
Waxaan nahay dad midba midka kale iyo beelaheena u hiiliya xilliyada dhibaatooyinka iyo maalin kasta. Hay'aduhu nama daryeelaan - WAAN daryeelnaa. Dhammaanteen waxaan leenahay baahiyo, dhammaantoodna waxaan leenahay wax aan soo bandhigno. Nagala soo qaybgal ku-dhaqanka midnimo, haku sadaqaysan.
Wadajirka Caafimaadka xididka
daryeelka | madax-bannaanida | ficil toos ah
Isku-duwayaasha dawooyinka Rosehip
Aruurinta Caafimaadka ee Rosehip waa koox mutadawiciin ah oo ku taqasusay Wadooyinka Caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa daryeelka caafimaadka ee ka shaqeeya Portland, Oregon. Waxaan ku bixinaa gargaarka degdegga ah iyo daryeelka degdegga ah dibad-baxyada, ficillada tooska ah, iyo goobaha kale ee iska caabinta iyo halganka. Waxaan sidoo kale tababbarnaa aqoon-darrooyinka kale ee waddooyinka waxaanan gashannaa tababbarka fayo-qabka bulshada.
Ururka Ruckus waa shabakad dhaqameed badan oo tababarayaal ah oo u heellan bixinta bixinta aaladaha lagama maarmaanka u ah, diyaarinta, iyo taageerada si loo dhiso awooda waxqabadka tooska ah ee cadaalada deegaanka iyo dhaqdhaqaaqa isbedelka bulshada. Waxaan la shaqeynaa bulshooyinka asaliga ah iyo bulshooyinka kale ee midabka leh kana shaqeeya sidii loo ilaalin lahaa guryahooda iyo deegaanadooda iyo caddaaladda cimilada.
Abaabulka Reer Miyiga iyo adkeysiga
Abaabulka iyo Adkeynta Miyiga ayaa laga sameeyay degmada Madison County, NC guga ee 2017 iyadoo laga jawaabayo baahida loo qabo cod reer miyi ah oo u shaqeeya dhammaan kuwa ugu yeera buurahan guryahooda. ROAR waxay ka shaqaysaa sidii loo xoojin lahaa isku xidhnaanta iyo xushmadda ka dhexaysa dhammaan dadka deggan xaafadaha buuraleyda ah iyagoo ka hortagaya nidaamyada dulmiga iyada oo loo marayo waxbarashada, wacyigelinta, xoojinta iyo gargaarka labada dhinac.
Kooxda Sail Relief Team
Waxaa la aasaasay 2017, iyada oo laga jawaabayo duufaanta ba'an ee ku dhufatay xeebaha Atlanta, hadafkayagu waa in gurmadka masiibada loo geeyo bulshooyinka fog, kuwa go'doonsan iyo kuwa aan si wanaagsan uga adeegin xeebaha. Waxaan wax ka qabannaa saddexda baahiyood ee aasaasiga ah ee Waxqabadka, Soo kabashada iyo adkeysiga si loo badbaadiyo nolosha waqtiyada xaaladaha degdegga ah oo dib loo dhiso tayada nolosha wixii ka dambeeya.
Dooxada 'Salt Lake Valley'
Kooxda Salt Lake Valley COVID-19 Mutual Aid Group waa koox abaabulleyaal ah oo loo sameeyay inay fududeeyaan isku xirnaanta guud ahaan dooxada Salt Lake ee udhaxeysa shaqsiyaadka u baahan taageerada sababtoo ah dillaaca COVID-19, iyo shaqsiyaadka u fidiya taageeradooda beeshooda. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan bixinno gargaar si ba'an u saameeya fayraska annagoo fududeyneyna gaadiidka iyo bixinta baahiyaha aasaasiga ah sida raashinka, dawooyinka la qoro, iyo sahayda caafimaad.
Gargaarka Santa Fe
Sante Fe Mutual Aid waa isku xirka midnimada, wadaagida kheyraadka, iyo deriska jaarka abaabulka inta lagu gudajiro 19 iyo wax kabadan.
Seeraha Wadajirka Nabadda
Tan iyo 1986, Seeds of Collective Peace waxay bixisay taageero saadka iyo tababaro siinta kuwa u halgamaya safka hore ee arrimaha bulshada, deegaanka, iyo cadaaladda dhaqaalaha. Waxaan nahay koox yar oo dhiirrigelisay shaqsiyaadka u heellan aasaasidda aasaaska - oo ah, cuntada, biyaha, iyo xirfadaha - oo muhiim u ah guusha ololayaasha tooska ah iyo abaabulka ballaaran.
Gargaarka Isugeynta Shenandoah
Shenandoah Mutual Aid waxay u adeegtaa dadka ku nool Dooxada Shenandoah iyadoo ku xireysa kheyraadka kuwa aad ugu baahan. Waxaan u taaganahay cadaalada, dimuqraadiyada, iyo difaaca guud ee bulshada dhexdeeda. Waxaan nahay deris caawiya deriska. Waan ilaalineynaa.
Ururka Budist Rifle Association
Ururka hantiwadaagga ee 'Socialist Rifle Association' waa hay'ad waxbarasho oo u heellan sidii ay u siin lahayd fasalka ka shaqeeya macluumaadka ay ugu baahan yihiin inay si wax ku ool ah ugu hubeeyaan naftooda iyo difaaca bulshada. Tan waxaa ka mid ah nooc kasta oo difaaca bulshada, laga bilaabo xaqqa fasalka shaqada si loo haysto qoryo ilaa awood lagu si fiican ugu fiicnaado dhinacyada dawooyinka, gargaarka musiibada, saadka, beeraha, iyo xirfadaha badbaadada. Hadafka Socialist Rifle Association hadafkiisu waa in la helo bedel guud, mid sun ah, garabka midig, iyo dhaqanka qoriga oo aan loo wada dhanayn oo bulshada inteeda badan hubka ku haysay sannado badan.
Mashruuca Solar Village
Mashruuca Solar Village waa hay'ad aan macaash doon ahayn, 501 (c) (3) oo si firfircoon uga caawineysa qoysaska Hindida iyo Afrikaanka inay noloshooda ku horumariyaan iyada oo loo marayo marin, helitaan, dayactir iyo aqoonta nidaamyada tamarta qorraxda ee guryaha aan lahayn il kale oo kale oo awood leh. Adduunyada maanta, waxaan aaminsanahay in korontadu noqoto il muhiim ah, oo la mid ah tan muhiimka u ah biyaha, cuntada, iyo hoyga. La'aanteed, dadka waa la takooraa. Tan, dadku waxay awood ku yeeshaan iftiinka iyo helitaanka macluumaadka iyagoo adeegsanaya taleefannadooda gacanta.
Wadashaqeynta Midnimo Distro
Solidarity Supply Distro waa isbahaysi abaabulayaasha bidix iyo abaabulayaasha ka soo horjeedda jariimada ee Boston kuwaasoo dhista adkeysiga bulshada aafada COVID-19.
Wadajirka Cuntada jikada
Jikada cusub ee 'StuF Crisis Relief Mobile jikada' waxay raadinaysaa inay balaariso si ay awood ugu yeelato inay la kulanto caqabadaha sii kordhaya ee sugnaanta cunno ee Oklahomans. Haddii loo marayo ka-hortagga masiibada, dadaallada quudinta-bulshada, ama taageero sare ee abaabulidda maxalliga ah, waxaa jira habab badan oo gacan looga geyn karo guud ahaan gobolka, oo gacan ka geysan kara abuurista is-kaashi is-kaashi ee ka dhex dhaca abaabulayaasha ololaha. Waxaan aaminsanahay daryeelida beelaheena anagoo bixinayna adeega aasaasiga ah ee cuntada inay tahay waddo la taaban karo oo lagu taageerayo dadka gobolkayaga.
Shabakada Caawinta Mutual Aid South
Waxaan nahay shabakad dad ah oo ku baahsan South Jersey oo ka shaqeeya mashaariicda gargaarka wadaagga ah ee ka jawaabaya xiisadda COVID-19. Ugaarsi si aad ula xiriirto, ama uga qeyb gasho mid ka mid ah mashaariicdeena.
Golaha Dhaqdhaqaaqa Koonfurta
Golaha Dhaqdhaqaaqa Koofurta ayaa ah istaraatiijiyad abaabul loogu talagalay bulshada iyo maamulka dhaqdhaqaaqa oo ku saleysan ballan qaadka siyaasadeed ee uu ka hadley Dagaalyahanada Xoriyada Koofurta Fannie Lou Hamer: 'Ma jiro qof xor ah ilaa qof walbaa xor yahay.' Golaha Dhaqdhaqaaqa Koofurta wuxuu ka kooban yahay saldhig ballaaran oo hoggaamiyeyaasha ku saleysan koonfurta iyo bulshooyinka ku nool kuna dagaallama jihooyinka safka hore. Waxaan aaminsanahay inaan si xoogan u wada jirno, oo aan ka qeybgalno dimuqraadiyad guud si aan u adeegsano awood siyaasadeed bulshada, magaalada, gobolka, iyo heerarka gobollada.
Midnimada Koonfurta waa koox-hoosaad, koox ku saleysan iskaa wax u qabso ee bulshada ku dhisan midnimo la aanta rabitaankooda ku aadan xoreynta. Waxaan abaabulnaa gaarsiinta cuntada, agabyada caafimaadka iyo baahiyaha aasaasiga ah si toos ah oo aan ugu talagalnay xaafadaha magaalada New Orleans maxaa yeelay dowladda ma aysan buuxin baahiyahan. Waxaan saameyn ku yeelanay mabaadii'da lidi ku-taliska ah waxaana abaabushay haweeney madow ah.
Koonfurta WV Harm Redux
Waxbarashada yareynta waxyeellada, gargaarka koowaad, iyo sahayda si badbaado leh loo adeegsado ee ku taal koonfurta West Virginia.
Caafimaadka Magaalada Spire
Waxaan aruurineynaa sahay si aan ugu qaybinno kuwa baahan. Waxaan dan gaar ah ka leenahay dadka waayeelka ah iyo kuwa la tallaalayo.
Golaha Dhakhaatiirta Daawada ee taagan
Waxaan isku dubarideynaa sahayda caafimaadka iyo daweynta, ilaha aadanaha, iyo noocyada kale ee gargaarka caafimaadka / bogsashada ee udhaxeeya kooxaha soo socda: Dhammaan kaamamka Taagan Istaagga Dhagaxa (Oceti Sakowin, Dhagax Dhawr, Dhagarqabe Cas, Sicangu-Rosebud, iyo kuwa kale), Istaag Adeegyada Degdegga ah ee Rock, Adeegyada Caafimaadka ee Hindida, Golaha Qabyaaladda ee Rock Rock, Mni Wiconi Isbitaalka Isku-dhafan ee Caafimaadka, iyo bulshada weyn ee allopathic & healer.
Magaalada Magaalada Sida Ugu Qabanqaabinta Caafimaadka Maskaxda
SCORCH- Iskuxirka Magaalada ee abaabulida Radical Community Health waa beel ku saleysan, dhamaan iskaa wax uqabso wadayaasha u dhaqdhaqaaqa daryeelka caafimaadka iyo dhakhaatiirta wadooyinka ee Pittsburgh, PA. Waxaan bixinaa gargaarka degdegga ah, daryeelka degdegga ah, tababbarka, iyo qaabab kale oo ah ilaha daryeelka caafimaadka ee aaggayaga, annagoo mudnaanta siinna baahiyaha bulshooyinka aan awoodda lahayn iyo kuwa awoodda siiya ee ku sugan gobolkeenna iyo dhaqdhaqaaqa ku saleysan caddaaladda bulshada. SCORCH waxay lashaqeeysaa aragtida isbedelka dheer ee bulshada ee bulshooyinka dhexdooda, isku diyaarinta nafsadeena iyo bulshada ku xeeran musiibada iyo shaqada ku saleysan dhibaatooyinka.
Kaalmaynta Mutadawalka ee STL
STL Mutual Aid waa shabakad abaabulan, daaweyn, farshaxanno, hoggaamiyeyaasha bulshada, iyo maalin kasta dadku isu yimaadaan si ay u gaarsiiyaan cunno iyo saanad, u bixiyaan midnimo dhaqaale, u fidiyaan taageero shucuureed, iyo dadka ku xiriiriya derisyadooda.
Artist Soup Artist / isku duwaha ololaha iyo Xarunta Kheyraadka Bulshada
Waxaan dhisnaa awood isku xirnaan iyadoo aan isku xireyno isla markaana aan kobcinno kooxo iyo shaqsiyaad ka tirsan bulshooyinkayada ka shaqeeya cadaaladda bulshada. Waxaan dhiseynaa bulshada iyo dhaqaalaheena ku saleysan iskaashi iyo hal abuurnimo anagoo iska caabinayna dulmiga iyo qadarinta.
Qorrax ka soo baxa waa dhaqdhaqaaq lagu joojinayo isbedelka cimilada loona abuuro malaayiin shaqooyin wanaagsan oo hawsha ku jira.
Waxaan dhiseynaa ciidan dhalinyaro ah si isbedelka cimilada looga dhigo mudnaan deg deg ah guud ahaan Ameerika, lana joojiyo saameynta musuqmaasuqa ee fuliyayasha shidaalka ee siyaasadeena, oo aan doorano hogaamiyeyaal u istaaga caafimaadka iyo ladnaanta dadka oo dhan.
Taageerida Port Foundation, Inc. waa 501 (c) 3 urur aan macaash doon ahayn oo ujeedadiisu tahay kobcinta, beero iyo bixinta dareen dib u soo cusboonaysi lahaansho bulshada iyo heer sare ee bulshooyinka aan liitaa. Iyada oo loo marayo farshaxanka, samafalka iyo deeqda waxbarasho, Taageerada Port Foundation, Inc. waxay kordhin doontaa karti-is-weydaarsiga, iyo kobcinta jawi aan wanaagsanayn halkaas oo heerka wanaagsan ee seddexdaas xarumood loogu dabbaaldego loona ballaariyo.
Isku Aruurinta Gargaarka Tacoma
Wadajirka Gargaarka Wadajirka ah ee Tacoma Mutual Aid wuxuu ka shaqeeyaa wada shaqeynta bulshada Tacoma si loo taageero kheyraadka, aqoonta, iyo wadaagida xirfadaha dhammaan xaafadaheena.
Wadada 'Sand Sands'
Tar Sands Blockade waa iskaa wax u qabso mutadawiciin ah, abaabul wadareed ku saleysan qaab wada jir ah oo u heellan ka shaqeynta wada shaqeynta jaaliyadaha safka hore saameynta ugu badan ku leh macdanta biraha, safarka, iyo dib u nadiifinta.
Adeegyada U doodista Cadaaladda Deegaanka ee Texas
Adeegyada U doodista Cadaaladda Deegaanka ee Texas (tejas) waxaa ka go'an inay siiso xubnaha bulshada aaladaha lagama maarmaanka u ah in la abuuro waara, bulshooyin caafimaad qaba deegaanka iyadoo la barayo shakhsiyaadka welwelka caafimaad iyo saameynta ka dhalan kara wasakheynta deegaanka, xoojinta shaqsiyaadka fahamka sharciyada deegaanka iyo xeerarka iyo kor u qaadista dhaqan galkooda, iyo bixinta xirfadaha dhisida bulshada iyo ilaha waxqabadka bulshada ee wax ku oolka ah iyo kaqeybgalka shacabka oo weyn.
Wajiga qalalaasaha cimilada iyo nidaamyada dulmiga, Shabakada Dandelion waxay qaadaysaa talaabo. Kororka xawaaraha aaminaadda, Shabakada Dandelion waxay raadineysaa soo bixitaanka cilaaqaadka xorta ah iyada oo loo marayo gargaarka labada dhinac iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka.
Xarunta Hubinta Nolol Joogta ah
Santa Cruz Hub ee Nolol waara ayaa ah 501 (c) 3 oo ah hay'ad aan macaash doon ahayn oo fadhigeedu yahay Santa Cruz, CA, oo taageerta xirfad-wadaagista, adeegsiga habboon ee kheyraadka, iyo isku xirka bulshada iyo hal abuurka. Mashruucyada ugu badan ee mashruucyada halkii ay ka ahaan lahaayeen hay'ad xarun dhexe leh, Hubku wuxuu ka kooban yahay dhowr urur oo si caddaalad ah u madaxbannaan iyo is-dhexgal ay ka mid yihiin SubRosa Community Space.
Hay'adda Smile Trust waxay qaadatay howsha siinta ilaha, waxbarashada, shaqooyinka, iyo guryeynta si loola dagaallamo saboolnimada iyo hoy la’aanta.
Wadajirida Wada-tashiga Biyo-mareenka
Isku-duwaha Wada-tashiga Biyo-xidheenka waa mashruuc dhisme bulsho oo xag-jir ah oo ay ka kooban yihiin dhaqaale, midab, jinsi, jinsi, iyo caddaaladda deegaanka. Waxaan nahay kacdoono-ka-hor-tagayaasha ka soo horjeedda gobolka Tidewater VA si loo dhiso midnimo iyada oo loo marayo kaabayaasha dadka, gargaarka labada dhinac, iyo difaaca bulshooyinkayada. Tan waxaa loo isticmaali karaa barashada bulshada, qorsheynta, iyo dhisida meel bannaan, waxaan rajeyneynaa inaad nagu soo biiri doonto. Waxaan nahay deegaanka, isbahaysiga bidix ee ku saleysan wadajirka, waxaan diidanahay kala-goysnimada midab-kala-soocida ka dhexeysa jabhadaha kacaanka.
Ururka Tierra y Libertad Ururka
TYLO waa urur guud, oo ka dhisan Koonfurta Tucson, Arizona, oo dhiirrigelisa himilooyinka sinnaanta, caddaaladda, iyo go'aan-gaarista. Xubnaha, taageerayaasha, iyo xulafada ururka waxay u shaqeeyaan isbedel bulsho oo wanaagsan iyo ixtiraamka dhulka, dadka, iyo dhaqanka.
Gargaarka Labada Dhinac ee TN Valley
Qalabka gargaarka ee 'Valley Valley Mutual Aid' waa koox ka socota East Tennesseans oo midba midka kale taageerayo isla markaana dhisaya bulshada guud ahaan gobolka Tennessee Valley weyn.
Qaybta Cuntada ee Tucson
Qaybta Cuntada ee Tucson waa dadaal wada jir ah oo ay dadka Tucsonans u wadaagayaan kheyraadka nolosha siinaya annaga dhexdooda, iyada oo aan lagu tiirsaneyn dowladda ama taageerada shirkadaha. Waxaan ku shaqeynaa mabaadi'da caawimaadda wadajirka ah, waxaan u qeybineynaa cunnada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah xukun la'aan qof kasta oo weydiista. Waxaan raadineynaa inaan ka dhigno ilo marinno la heli karo, iyadoo mudnaanta la siinayo baahiyaha deriskeenna la illoobay, la iska indhatirey, oo ay ka faa'iideysteen kuwa awoodda leh. Tani waa mashruuc gebi ahaanba iskaa wax u qabso ah kaas oo ku xidhan tabarucaadka xubnaha bulshada si ay u shaqeeyaan.
Mashruuca Gargaarka ee Tupelo
Mashruuca Gargaarka Tupelo Mutual Aid waa koox uu hogaaminayo oo abaabulay kooxo aan faa'iido doon ahayn oo ku foogan kobcinta bulshada iyo midnimada iyada oo loo marayo gargaarka labada dhinac. Waxaan saldhig u nahay Tupelo, Mississippi.
Tuscaloosa Gargaarka Mutual
Waxaan nahay urur wada-shaqeyn wada jira oo halkan u jooga inaan u adeegno bulshada Tuscaloosa.
Trystereo waa mid iskaa wax u qabso ah oo wax looga qabanayo yareynta waxyeelada wadajirka ah ee lagu aasaasay 2011.We waxaan nahay bilaash, ilaha caafimaadka dadweynaha ee guurguura ee loogu talagalay dadka isticmaala daroogada koonfurta bari ee Louisiana.
Halbeegayaasha caalamiga ah ee bina-aadamnimada
Halbeegayaasha aan-gaarka ahayn waa dad da 'walba leh, dad asalkoodu fara badan yahay, iyo dad aammin badan. UUs waa geesiyaal, xiiso badan iyo naxariis dadka fikirka leh iyo kuwa sameeya. Waxaan abuurnaa ruuxiga iyo bulshada xadka ka shisheeya, anagoo ka shaqeynayna cadaalad iyo jacayl dheeri ah nolosheena iyo aduunkaba.
Kaniisadda United ee Masiixa
Kaniisadda Midoobey ee Masiixiyiinta (UCC) waa beel gaar ah oo kaladuwan oo Masiixiyiin ah oo isu yimaada sidii hal kaniisad oo ku biira caqiidada iyo ficilka. Iyadoo ay ka badan yihiin kaniisadaha 5,000 iyo ku dhowaad hal milyan oo xubnood oo ku baahsan Maraykanka, UCC waxay u adeegtaa Ilaah marka la abuurayo adduun caddaalad ah oo waara. UCC waa kaniisad ugu horreysa, kaniisad soo dhaweyn xad dhaaf ah leh, iyo kaniisad ay… kuligood mid ka noqon karaan (Yooxanaa 17:21).
Himilada United Peace Relief waa in looga jawaabaa musiiboyinka gargaarka bani'aadamnimada ee caadiga ah iyo kuwa kale. Gargaarka musiibada wuxuu noqon karaa duufaan, duufaan duufaad, abaar, dab, belaayo, qarax, burburka dhismaha, shilalka gaadiidka ama xaalad kastoo kale oo sababa silica aadanaha ama abuuraya baahiyaha bini aadamka ee dhibanayaashu ayan yareyn karin gargaar la'aan. Waxaan ku mideysannahay go'aankeenna ah sidii aan u dhiirrigelin lahayn nabadda iyo xasilloonida nafteena iyo adduunkaba.
Gargaarka Wadajirka ah ee Dooxada Utah
Utah Valley Mutual Aid waa isku xirka gargaarka ee dhammaan dooxada Utah. Waxaan raadineynaa inaan awoodno midba midka kale si shaqsi ahaaneed iyo si wada jir ahba annaga oo u sameynna tallaabo toos ah iyo caawinaad labada dhinac ah. Tan waxaa laga yaabaa inay ahaato raashin, sahay caafimaad, daawo qoris ama baahiyo kale oo ay adag tahay in la helo xilliyada argagaxa. Waxaan dooneynaa inaan u adeegno oo aan xoojino kuwa ku sugan xuduudaha oo aan u dhisno adkeysiga xaafadaha gobolka oo dhan.
Dhammaanteen waxaan tagnay San Diego
Dhamaanteen waxaan helnaa SD waa koox aan xukun lahayn oo halkan u taagan in lagu bixiyo taageerada bulshada. Waxaan ku shaqeyneynaa qiimaha in waxa aan bixinaa ay tahay midnimo, mana ahan sadaqo.
West Street Recovery waa urur asal ahaan abaabulan oo ujeedadoodu tahay in loo isticmaalo Harvey Recovery si loo dhiso awooda bulshada.
Galbeedka Massachusetts Aid Mutual Aid
Waqtiyadan baqdinta leh iyo kuwa aan la hubin, waxaa muhiim ah inaan is muujinno oo aan xasuusano inaan keli nahay.
Wadajirka Waxqabadka ee Willamette
Wadajirka 'Willamette Action Collective' waa urur ka soo horjeedda boqortooyooyinka, urur ku saleysan dooxada Willamette. Hadafkeedu waa in laga shaqeeyo sidii loo burburin lahaa nidaamyada boqortooyooyinka iyo hanti-goosadka ee dowladda iyo dhaqaalaha, iyo in la dhiirrigeliyo u guurista nidaamyada mas'uulka ka ah deegaanka.
Kooxda Jawaabta Wolfpack Gunshot
Kooxda Jawaabta Wolfpack Gunshot waa shicib joojiya wadajirka dhiig baxa, oo ku saleysan mashruucyada Cleveland, Ohio. Kooxda Jawaab celinta ee Wolfpack Gunshot waa koox dhalinyaro ah oo caqli badan oo midab leh una gudbaya saxan si ay gacan uga geystaan ​​badbaadinta nolosha una noqdaan hoggaamiyeyaasha beeshooda.Waxaan tababarnaa inaan ka jawaabno Gunshot, mindi iyo bambaano bambo.